စွဲလမ်းနှင့် adrenal cortex (2013) - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ပုံနှိပ် 2013 မတိုင်မီအွန်လိုင်း Published, Doi: 10.1530 / EC-13-0028 Endocr Connect ကို 2013 vol ။ အဘယ်သူမျှမ2။3R1-R14
Gavin P ကို ​​Vinson⇑ နှင့်
ကယ်ရိုလိုင်း H ကိုနန်
ဇီဝနှင့်ဓာတုသိပ္ပံ, လန်ဒန်ဘုရင်မမာရိကတက္ကသိုလ်, လန်ဒန် E1 4NS, ဗြိတိန်၏ကျောင်းစာအုပ်
စာပေးစာယူမိသားစုဆရာဝန် Vinson အီးမေးလ်မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
သိသိသာသာအထောက်အထား hypophyseal-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးနှင့် corticosteroids အေးဂျင့်အမျိုးမျိုးမှစွဲလမ်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို adrenal cortex ဟာသော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းပြသထားတယ်။ (ကြွက်သို့မဟုတ်ကြွက်တွင်သို့မဟုတ် corticosterone) cortisol ၏ယေဘုယျအားပလာစမာပြင်းအားသည်လူနှင့်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့်လက်ခဏာ sequelae နှင့်အတူဆက်စပ်အကြံပြုတဲ့ထုံးစံ၌မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်တိုးမြှင့်။ Corticosteroid အဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ပြန်လည်စတင်ရန်အတွက်ပုံမှန်တန်ဖိုးများကိုပြန်လည်ကျလိမ့်မည်။ ဦးနှောက်အကြားဖြစ်နိုင်သော interaction ကဟော်မုန်း (CRH) နှင့် proopiomelanocortin (POMC) ထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်တကျ HPA လွှတ် corticotrophin နှင့်ဒါ့အပြင်အဆိုပါ adrenal gland သူ့ဟာသူအတွက်ဒေသခံ CRH-POMC စနစ်, ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအထောက်အထား ပို. ပို. အားလုံး interlinked နှင့်ဦးနှောက်နှင့်ဦးနှောက် POMC ထုတ်ကုန် CRH တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သောအသွေးကို-ဘွား HPA နှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ Corticosteroids သူတို့ကိုယ်သူတို့အလှနျစိတ်ဓါတ်များကိုထိခိုက်သိကြသည်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစွဲလမ်းစေပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်စွဲဘာသာရပ်များထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှု၌ရှိသကဲ့သို့ HPA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအခြေအနေများ, အတွက်, ဒါမှမဟုတ်နေ့၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ပြန်သွားကြသည်ဖို့အတှကျမြင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရှိသေး၏။ မကြာမီကလေ့လာမှုများစွဲလမ်းလက္ခဏာတွေ၏ခင်းကျင်း၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်း adrenal cortex နဲ့ corticosteroids ၏လုပ်ရပ်များ၏အတွင်းသို့လှုပ်ရှားမှုသို့တိုက်ရိုက် attribute ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားပေးပါ။ ထို့အပြင်စွဲများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုလည်း adrenocortical function ကိုမှတွေကပေါ်ကနေဖြစ်နိုင်သည်: လူသားတွေအတွက်, ယောက်ျား DHEA (နှင့် DHEAS) ၏မြင့်မားသောလျှို့ဝှက်ချက်မှတဆင့်ကာကွယ်ထားခံရစေခြင်းငှါ, ကြွက်များတွင်အမျိုးသမီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုမိုမြင့်မား corticosterone လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစွဲအတွက် adrenal cortex ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုသရုပ်ပြရန်နှင့်ဒါ့အပြင် adrenocortical function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုစွဲများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအဆိုပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသည်အဘယ်မှာရှိပါဆုံးကိစ္စများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မခံခဲ့ရပေမယ့်, စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များ၏ဒါမှမဟုတ်ကိုးကားလေ့လာမှုများလူ့ဘာသာရပ်များ၏လိင်, ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ adrenal နှင့်အတူစွဲပေါင်းသင်းခြင်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပါသည်။ အဆိုပါ adrenocortical ဟော်မုန်းပင်မော်ဖင်းအကိုက်အဆိပ်ဟာ adrenal gland ချိတ်ဆက်ခဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာမီအမှန်မှာကကောင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Lewis က (1) နှင့် Mackay & Mackay (2) adrenalectomy လိင်ဖြစ်စေများတွင်အထီးသို့မဟုတ် methadone အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, နာတာရှည်ကုသမှု adrenocortical hypertrophy ထုတ်လုပ်ပြသ (3, 4)။ အကျိုးဆက်အား၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အချိန်ကနေစွဲလမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအေးဂျင့်အဖြစ် adrenal ၏ဟော်မုန်းများ၏လုပ်ရပ်များအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိခဲ့သည်။ cortisone (အချိန်မှာရှေးခယျြမှု၏ကုထုံး corticosteroid) နဲ့ကုသမှုမကြာမီယောက်ျားအတွက် meperidine နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည် (5)ပုံအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Lovell hypoadrenocorticism နှင့်အတူအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဆက်နွယ်နေချိန်တွင် (6).
ပို၍ စနစ်ကျသောလေ့လာမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် corticosteroids များကိုအခြားဝတ္ထုအသစ်များနှင့်အတူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့် Fraser & Isbell တို့ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ (7) (မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှ) တကယ်တော့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအတွက်အမျိုးသားများတွင် eosinopaenia နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့အကြံပြုဖို့ပထမဦးဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ corticosteroids ၏မြင့်မားရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အဲဒီအခြိနျမှာအသုံးပြုတဲ့အတိုင်းအတာခဲ့ကြသည် (8)။ မော်ဖင်းအကိုက်ပကတိဖြစ်လေ၏သည့်အခါ Eosinophil အလျင်အမြန်ပုံမှန်မှတ်တော်မူ၏။ ဤရွေ့ကားစာရေးသူလည်း cortisone သို့မဟုတ် ACTH ဖြစ်စေနှင့်အတူကုသမှုအမျိုးသားများတွင်ငွေထုတ်လက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကာလကိုတိုစေကြောင်းတွေ့ရှိရသောကြောင့်, သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းမရှိဟုယူဆနိုင် (7, 9, 10, 11)။ အမှန်စင်စစ် corticosteroid နှင့်အတူနာတာရှည်ကုသမှုအကြာတွင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေမှကိုယ်တိုင်ကဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် (12).
ဒါကြောင့်စွဲလမ်းအတွက် corticosteroids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်အခြေခံမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး, အကြောင်းမရှိသို့မဟုတ်စွဲလမ်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသက်ရောက်တာတွေရပ်စဲသည့်အခါအောက်ပိုင်း adrenocortical စဉ်ဆက်မပြတ်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ယင်း၏မြင့်လား? စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ drive ကိုအမှန်တကယ်၎င်း၏ sequelae အတူ cortisol ကိုလျှော့ချဖို့ drive ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်မလား? သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးအတွက် corticosteroids ၏မြင့် Secret စိတ်ဖိစီးမှုတစ်တုံ့ပြန်မှုရိုးရှင်းစွာပါသလဲ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ adrenal cortex စွဲများ၏ဝယ်ယူနှင့်လည်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းငြင်းခုန်။
ဦးနှောက်နှင့်အစွဲထဲမှာ hypophyseal-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး
စွဲစပ်လျဉ်းများတွင် ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်စနစ်တကျ (ဆိုလိုသည်မှာသွေးဘွား) HPA ဝင်ရိုးဖို့ထက်ဦးနှောက်ထဲမှာ (HPA) အစိတ်အပိုင်းများ hypophyseal-pituitary-adrenal မှပေးဆောင်ခဲ့သည်။ လူအားလုံးတို့သည်အစိတ်အပိုင်းများကိုဦးနှောက်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,, အ adrenal သူ့ဟာသူစွဲဖို့အရေးပါသောအယူအဆနှင့် ပတ်သက်. ပါကဦးနှောက်နှင့်စနစ်တကျ HPA function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးပျက်ပြယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအပိုင်းကိုစွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက် HPA function ကိုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကို examine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဟုတျကွောငျးဖျောပွသညျ, နှင့်၎င်း၏ function ကိုနီးကပ်စွာနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်စနစ်တကျ HPA ဆက်စပ်နေပါတယ်။
လွှတ်ဟော်မုန်း (CRH) Corticotrophin ဦးနှောက်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်နေသည် (13)။ ပထမဦးစွာ CRH အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ (PVN) တွင်အစပြုသည်ဟုအာရုံခံဝစောအားဖြင့်ပျမ်းမျှထူးမြတ်သောမှာယင်း၏လွှတ်ပေးရန်အောက်ပါယင်း၏စနစ်တကျသက်ရောက်မှုပြုပြင်။ CRH အဆိုပါ hypophyseal ပေါ်တယ်စနစ်ကတဆင့် anterior pituitary ၏ corticotrophs ပို့ဆောင်ပြီးတော့ ACTH ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်နေသည်။ ACTH အထွေထွေစောင်ရေအတွက်သယ်ဆောင်အလှည့်၌တည်ရှိ၏နှင့် adrenal cortex အတွက် corticosteroids ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆျော။
ထို့အပြင်သို့သော် CRH ၎င်း၏ receptors CRHR1 နှင့် CRHR2 နှင့်လည်း CRH လုပ်ရပ်များ modulates ရာ CRH binding ပရိုတိန်း (CRH-BP), CRH ယူဆရအဓိကအားတစ် neurotransmitter အဖြစ်ပြုမူရှိရာအခြားသောဦးနှောက်နေရာများ၌တွေ့နေကြပါတယ်။ ဤဆိုဒ်များအတွက် cerebrocortex, limbic စနစ်, hippocampus, amygdala, locus coeruleus, olfactory မီးသီးများနှင့် cerebellum ပါဝင်သည် (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)။ စွဲလမ်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့အပို hypophyseal CRH များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာ HPA ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ် (18, 20)စင်စစ်ရှိပါတယ် (က hypothalamic CRH ၏ multifactorial စည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုရန်အရာမှတဆင့် pathwaysသဖန်းသီး။ 1).
အဆိုပါတိုးချဲ့ HPA ဝင်ရိုး။ မှ (20, 49, 80, 82, 192, 193) နှင့်စာသားကြည့်ပါ။ BNST, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ; PFC, Pre-တိုကျရိုကျ cortex; PVN, paraventricular နျူကလိယ; VTA, (ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်) ventral tegumental ဧရိယာ; လွှတ်ဟော်မုန်း corticotrophin CRH, POMC, proopiomelanocortin; + stimulatory; - inhibitory ။ အစိုင်အခဲမြှားသက်သေပြစည်းမျဉ်းကိုပြသနှင့်တွေက dotted မြှား postulated လုပ်ရပ်တွေကိုပြသပါ။ CRH အပြာစာ၌ညွှန်ပြနေသည်နှင့် CRH နှင့် POMC အချက်ပြ၏ဆိုဒ်များအသီးသီးအနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြနေကြသည်လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်: ဒီမှာမြှားသံသယမရှိ multifactorial ပေမယ် CRH နှင့် POMC peptides အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များပါဝင်သည်စေခြင်းငှါစည်းမျဉ်းလမ်းကြောင်းညွှန်ပြ။ PVN CRH အပေါ်အာရုံကြော POMC peptides ၏ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပြီး, အခြားစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, တစ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားအကြံပြုမယ်; သို့သော်ဦးနှောက်ထဲမှာ POMC အပေါ် CRH ၏အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်အနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အဲဒီအစား, အာရုံကြော POMC ၏စည်းမျဉ်းဥပမာ (multifactorial ဖြစ်ပါသည် (65, 67), ဤအဓိကအားစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်အာဟာရအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, စာသားကြည့်ပါ။ အတော်ကြာဦးနှောက်ဒေသများတွင် CRH စကားရပ်အပေါ် glucocorticoids ၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုပြသတာကိုသက်သေအထောက်အထားများ, သို့သော်, ရှိပါသည်။ အများအားဖြင့်, ဒီ, အ amygdala အတွက် မှလွဲ. စွဲနေတဲ့သော့ချက်ဒေသအနုတ် (19)ဘယ်နေရာမှာကအပြုသဘောဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်အတွက်, CRH, နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor အမျိုးအစားများမှ CRHR1 နှင့် CRHR2 ချည်နှောင်။ CRH ကိုယ်တိုင်ကအပြင်, နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ receptors အဆိုပါ urotensin မိသားစု၏ ligands ခညျြနှောငျ။ နှစ်ခု receptors ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေ; ပိုပြီးအစွမ်းထက်အစားအစာစားသုံးမှု depressing စဉ် CRHR1 agonists, CRHR2 လျော့နည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအရာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု-related တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန် (21, 22, 23, 24).
စွဲလမ်းအတွက် CRH ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့သိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားများအမှန်ပင်ရှိပါသည် (18, 25)နှင့်အထူးသဖြင့် reinstatement အတွက်ပေမယ့် data တွေကိုအမြဲတသမတ်တည်းမရှိကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကင်းအထီးကြွက်တစ် hypothalamic / CRH-mediated ယန္တရားကနေတဆင့် HPA ဝင်ရိုးလှုံ့ဆော် (26, 27)နှင့်ပေမယ့်ဒီလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုနီးကပ်စွာ corticosterone ချိတ်ဆက်မထားဘူး (28), နှစ်ခုလုံး Crh mRNA ကူးယူခြင်းနှင့်လည်ပတ်သော corticosterone နောက်ထပ်ကင်းရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်တိုးမြှင့်နေကြသည် (29)။ ဆနျ့ကငျြ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှာကြံဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်အရက်၏ထိတ်လန့်-သွေးဆောင် reinstatement အချို့သောစာရေးဆရာများနှင့်အညီ, corticosterone အပေါ် CRH ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မရ (30, 31, 32)။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ adrenal function ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်နောက်ဆက်တွဲ CRH-မှီခိုစျေးမှာ-သွေးဆောင် reinstatement အဘို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းလိုအပ် (33)။ ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်သည့်စွဲလမ်းလယ်ပြင်၌လေ့လာခဲ့မရပေမယ့် CRH လုပ်ရပ်များ၏ modulator တွေကို, CRH-BP ယခုတစ်ဦးအပိုဆောင်းအချက်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနေသည် (34, 35) ။ corticosterone နှင့် ACTH လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးစူးရှသောအရက်ထိတွေ့မှုတိုးနေကြသော်လည်းသူတို့နာတာရှည်ထိတွေ့မှုအတွက် inhibited နေကြတယ် (36, 37)။ CRH မဟုတ်သလို cortisol ကိုမရှဉ့်မျောက်များအတွက်ကင်း reinstatement ်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ် (38).
တိကျတဲ့မော်ဖင်းအကိုက် ပတ်သက်. နှင့် opioids နှင့်အတူကအထီးကြွက် hypothalamus အတွက်μ-နှင့်κ-type အမျိုးအစား opioid receptors မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်, corticosteroid ပြင်းအားပျံ့နှံ့နေတဲ့ CRH Secret ၏ opioid တားစီး၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်လျှော့ချကြောင်းရှင်းပါတယ် (39, 40, 41)။ လူသားမြားသညျတှငျ, opioids တိုက်ရိုက်လျော့နည်းသွားပျံ့နှံ့နေတဲ့ cortisol အတွက်ရရှိလာတဲ့, CRH လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် HPA ဝင်ရိုးတားစီး။ အထီးကြွက်များတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအစောပိုင်း CRH ၏တိုးမြှင့် (နှင့် HPA) နှင့်အတူ biphasic ဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်တားစီးလိုက် (41, 42); ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုအထီးကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြ (43)။ အမှန်မှာထိုသက်သေအထောက်အထား opioidergic ယန္တရားများကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအထီးကြွက်များတွင် CRH များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြု (44) လည်းစိတ်ဖိစီးမှု၏အခြေအနေများအောက်တွင် CRH Secret အတွက်တိုး။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော adrenalectomized တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးမြှင့် HPA လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သောအခြားအခြေအနေများတွင်စစ်မှန်သောမကျမည်အကြောင်း (45)။ opioids ကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်အမျိုးအစားများအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ကြောင့်ကြွက်၌ဤနှစ်ဆအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်: သူတို့ဆက်ဆက် neurotransmitters အားဖြင့်ရာထူးတိုးကြောင်း CRH လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတားစီး (46)။ လူသားများတွင်အရက်စွဲအတွက် opioids ၏ဖြစ်နိုင်သည်အရေးပါပါဝင်ပတ်သက်မှု (47) ထို့အပြင်အခြားအထက် HPA လမ်းကြောင်းမှတဆင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ခံရဖို့ပြသထားသည် (48).
အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ရပ်များအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် Crh အဆိုပါ hypothalamus အတွက် mRNA ကူးယူခြင်း, အရက်ပု PVN အပေါ်တိုက်ရိုက်ပြုမူပေမယ့်, ကင်း, နီကိုတင်းနှင့် cannabinoids အပါအဝင်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ, ကိုသက်ဝင် Crh သည်အခြားဦးနှောက်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကူးယူ (49)။ Adrenocortical လှုပ်ရှားမှုနေဆဲအထီးကြွက်များတွင်ကင်းစွဲ၏ reinstatement ဥပမာ, ဝေဖန်စေခြင်းငှါ (33)။ ထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်လည်းသိသိသာသာဖြစ်၏ အစောပိုင်းထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲတုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုကျနိုငျ (50)နှင့်အထီးကြွက်များတွင်အရက်ငွေ့မှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူ blunts Crh စူးရှသောအရက်မှကူးယူတုံ့ပြန်မှု (51).
တိကျတဲ့ CRHR1 ရန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ CRHR1 ပိတ်ဆို့မြင့်မားစားသုံးမှုမှ habituated အထီးကြွက်များတွင်နောက်ထပ်အရက်သောက်သုံးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် (52)လျက်, သုံးပြီးနောက်ထပ်လေ့လာမှုများနှင့် တွဲဖက်. Crh1 နောက်ကောက်တိရိစ္ဆာန်များကြောင့် CRHR1 အချက်ပြလမ်းကြောင်းအထီးကြွက်များတွင်အရက်စွဲထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး (53); စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် neuroadaptations တစ်ဘုံစကားရပ်ဟာသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုမြဲထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာရေးသူလည်းဝယ်ယူအရေးကြီးတဲ့ differential စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်ပြသပါ။ သိမ်းယူမှုဟာ HPA ဝင်ရိုးကပါဝင်ပတ်သက်အရေးကြီးတဲ့ mifepristone အားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ပါသည်သော်လည်း, ထို glucocorticoid blocker mifepristone အားဖြင့်အဖြစ် CRHR1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်။ သိုးထိန်း et al. (53) ဒီာင်းအတွက် non-hypothalamic CRHR1-နှင့်ဆက်စပ်လမ်းကြောင်းအကြံပြုကြောင်းတင်ပြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တိုင်းတာမူအကျင့်ာင်းအတွက်ထိခိုက်ခဲ့သည့်အတွက်စိတ်ကြွဆေး (MA) တုံ့ပြန်မှု, တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြ Crh1 ၏ကိုပယ်ဖျက်သော်လည်း DBA / 154J ကြွက်တွေမှာနောက်ကောက်ဒါမှမဟုတ်ရန်က CP 5262အသုံးပြုပုံ Crh2 MA-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း attenuated ။ ဒီနေရာမှာ endogenous urocortins ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဟာ amygdala ၏ basolateral နှင့်ဗဟိုအရေးပါအတွက်အာရုံစူးစိုက်, အကြံပြုခဲ့သည် (54).
Proopiomelanocortin (POMC), ACTH နှင့်α-melanocyte လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (α-MSH) အတွက်ပေး HPA ဝင်ရိုး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ, ဤအခြေအနေတွင်, စကားရပ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၎င်း၏မူလတန်းဆိုဒ် anterior pituitary နှင့် (ကြွက်အတွက်) သည် intermedia ဆန်းစစ်မှု။ POMC ကိုလည်းအဓိက hypothalamus ၏ arcuate နျူကလိယကနေနှင့် brainstem ၏နျူကလိယ Tractus solitarius ထံမှစီမံကိန်းများတွင်, ဦးနှောက်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ် (55, 56, 57)။ ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍအစားအစာစားသုံးမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်β-နဲ့အတူ Endorphins, နာကျင်မှုထိန်းချုပ်မှုများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်သည့်α-MSH ၏မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ α-MSH အဆိုပါ melanocortin အဲဒီ receptor (MCR) စီးရီး, MC3R နှင့် MC4R နှစ်ခုမှတစ်ဆင့်ပြုမူများနှင့်အဆုံးစွန်သောလည်းနာကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုမှု၏ရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိစေခြင်းငှါ (25, 58).
POMC စကားရပ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပေမယ့် ACTH နှင့်ထိုကဲ့သို့သောβ-နဲ့အတူ Endorphins ကဲ့သို့သောအခြား POMC ထုတ်ကုန်ဦးနှောက်သို့မဟုတ် cerebrospinal fluid ၏ Non-hypothalamic ဒေသများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြု (59, 60)အချို့တို့၏အသွေးအနေဖြင့်ဦးနှောက်ကိုပို့ဆောင်စေခြင်းငှါ (60, 61)။ အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ မှစ. , ဦးနှောက်ထဲမှာအဓိက adrenocortical-related POMC ထုတ်ကုန်-MSH αဖြစ်ပါတယ် (62), ယူဆရသည့် prohormone convertases PC1 နှင့် PC2 ၏ဖြန့်ဝေနှင့်ဆက်စပ် (63, 64)။ ဝေးအသုံးပြုပုံဤကိစ်စတှငျအာရုံစူးစိုက်မှု၏အဓိကအာရုံစိုက်အစားအစာစားသုံးမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်စွမ်းအင်ဟန်ချက်အတွက် leptin, ghrelin နှင့် agouti ပရိုတိန်းနှင့်အတူα-MSH ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖြစ်ပါသည် (56, 62, 65, 66, 67, 68).
စွမ်းအင်ဟန်ချက်အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအပြင်, α-MSH လည်းစွဲ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားနှင့် MC4R, CRH receptors ကဲ့သို့မော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန် (69, 70, 71)နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ကင်း၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများရွေးချယ် MC4R တားစီးနေဖြင့် modulated နေကြတယ် (72, 73)။ ထို့အပြင်စူးရှသောအရက်ကုသမှုကြွက်များတွင် hypothalamic နှင့်အခြားဦးနှောက်နေရာα-MSH စကားရပ်လျှော့ချပေမယ့်နာတာရှည်ကုသမှုကြောင့်တိုးမြှင့် (74).
ဟုတ်ပါတယ်, စွဲစပ်လျဉ်း POMC အပြောင်းအလဲနဲ့ယင်း၏ HPA-နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သက်သက်သာစဉ်းစားမရပါ။ β-နဲ့အတူ Endorphins များ၏ထုတ်လုပ်မှုစွဲလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုညွှန်ကြားဖို့မလွှဲမရှောင်စေပါတယ်။ အဆိုပါ opiates မော်ဖင်းအကိုက်, ဘိန်းဖြူနဲ့ methadone ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြွက်များတွင် stimulatory နှင့် inhibitory နှစ်ဦးစလုံးပေမယ့်လူသားမြားသညျ၌, endogenous opiates, HPA function ကိုအပေါ်အလားတူ inhibitory ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း၏အဓိကအရေးယူμ-receptors ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (49, 75).
အဘယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းယခုတိုင်အောင်ဖြစ်မထားပါဘူးဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို '' HPA ဝင်ရိုး '' အဖြစ်မှန်အတွက်ဦးနှောက်တွင်ဤအစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာဥပမာ, (Non-hypothalamic CRH ဦးနှောက်ထဲမှာပေါင်းစပ်, အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ် POMC ၏လွှတ်ပေးရန်ပြောခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့အဲဒီအစိတ်အပိုင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများကြောင့်မအကြံပြုစေခြင်းငှါ, ရှိမရှိမသိရသေးခဲ့သဖန်းသီး။ 1) ။ အလားတူပင်ကယ့်ကိုဦးနှောက် CRH သို့မဟုတ် POMC ထုတ်ကုန် adrenal cortex နှင့် hypothalamus မှတဆင့်ထက်အခြား glucocorticoids ၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူမည်သည့်အပြန်အလှန်ရှိသည်သောအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့မရ (ဥပမာပြုပါယူဆထားသည် (53)) ။ သို့သော် PVN အပါအဝင်အာရုံကြော glucocorticoid အဲဒီ receptor (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း) ပြတ်တောက်, စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏သက်ရောက်မှု ameliorates နှင့်လည်းအထီးကြွက်တွေမှာကြီးထွား HPA လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရလဒ်များ (76)CRH ၏ glucocorticoid တားစီး၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း (20, 77)။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, PVN ပါဝင်ပါဘူးပေးသော forebrain-တိကျတဲ့ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းနောက်ကောက်, စိုးရိမ်ပူပန်အပြုအမူတိုးလာပေမယ့်အထီးကြွက်တွေမှာ CRH ၏ glucocorticoid တားစီးလျော့ကျလာ၏တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် (77)။ ဒါဟာ HPA ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း-mediated တားစီး forebrain နေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သောဤလေ့လာမှုကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်အရာကိုတူညီမှုများပျက်စီးခံရဖို့လိုအပ်တဲ့စနစ်တကျ HPA နှင့်မည်ကဲ့သို့လွတ်လပ်သောသည်ဤစနစ်များကိုတကယ်စွဲ၌ရှိကြ၏၏ရန်ဂုဏ်ထူးအတွက်ဒေသခံဦးနှောက် CRH / POMC အစိတ်အပိုင်းများ၏အရေးပါမှုသည်။
ဦးနှောက် CRH နှင့်α-MSH အကြားအပြန်အလှန်
ဦးနှောက်ထဲမှာα-MSH ၏အဓိကအသိအမှတ်ပြု function ကိုဖြစ်သော်လည်း, အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အာဟာရ၏စည်းမျဉ်း CRH ၏ရန်နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ဖို့မပုံရသည်, တကယ်တော့သူတို့ကိုအကြား crosstalk ၏လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်, အစနစ်တကျ HPA ကဲ့သို့ POMC-processing တွင် neuron စိတ်ဖိစီးမှုများက activated နှင့်အထီးကြွက်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်အပေါ်တုံ့ပြန်သည့်အခန်းကဏ္ဍ (78, 79)။ ထို့အပွငျအာရုံခံ POMC-ဆင်းသက်လာ peptides ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် hypothalamic CRH နှင့်အရှင် ACTH လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းညှိ (80)။ ထို့အပြင်α-MSH လှုံ့ဆော် Crh အထီးကြွက်များ၏ PVN အတွက်ကူးယူ (81, 82), ဖြစ်သော်လည်းγ-MSH လိုပဲကြောင့်လည်းပုံဗဟို MCRs မှတဆင့် Interleukin-1β-သွေးဆောင် HPA လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် (83)။ ဦးနှောက်နှင့်စနစ်တကျ HPA ဆက်သွယ်ထားသော circuit ကိုပြည့်စုံကြောင်း glucocorticoids MC4R တစ် hypothalamic အာရုံခံဆဲလ်လိုင်းအတွက်အချက်ပြမြှင့်တင်ရန်သောတွေ့ရှိချက်များကအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ် (84)။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်, ရသောတူညီသောအစိတ်အပိုင်း CRH တစ်ခုတိုးချဲ့ HPA ဝင်ရိုး၏တည်ရှိမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ဂန္ထဝင်စနစ်အဖြစ် POMC ထုတ်ကုန်များနှင့် corticosteroids လည်း (ဦးနှောက်ထဲမှာအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်သဖန်းသီး။ 1) စိတ်ဓါတ်များနှင့်အပြုအမူအပေါ်တိကျသောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ။ နှစ်ခုစနစ်များ, ဦးနှောက်နှင့် somatic, ဘာပဲဇီဝကမ္မလှုံ့ဆော်မှုဟာစနစ်တကျ system ကိုကိုသက်ဝင်သောအတိုင်းအတာအထိအပြန်အလှန်, အမြင်ကျယ်â€~stressâ€™နှင့်နာရီလည်းစိတ်ဓါတ်များနှင့်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးဆက်များရှိရမည်။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး paracrinology) ၏အခက်ဖွဲ့စည်းရန်အဖြစ် neurosteroids ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ရောင်စဉ်ဒီတော့ကျယ်ပြန့်သည်။ များသောအားဖြင့် Non-အာရုံကြောရင်းမြစ်များမှအလွှာဟာလိုအပ်ပေမဲ့အတော်များများဒေသအလိုက်, ဖန်တီးနေကြသည်။ Oestrogens ထိုသူတို့တွင်ထင်ရှားသောဖြစ်ကြောင်းနှင့် hippocampus အတွက် aromatase လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး, သရုပ်ဆောင်, ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ် C ပေါ်တွင်, ထင်နေသည်19 steroid တစ်မျိုးအလွှာ (85)။ သူတို့ဟာအာရုံကြော plasticity အတွက်အခန်းကဏ္ဍများ (86) နှင့်အာရုံကြော (85, 87, 88) လည်းဒေသအလိုက်ဖန်တီးသော neuroprogesterone အပါအဝင်အခြားအာရုံကြောတက်ကြွအေးဂျင့်များ၏ function ကို, ထိန်းညှိ (89)။ အီစထိုဂျင်ဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် (90, 91, 92)။ ဦးနှောက်ထဲမှာအီစထိုဂျင်အရေးယူဂန္ထဝင် estrogen receptor ငါ±နှင့်Î²မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းနှင့်လည်းအမြှေးပါး metabotropic အချိုမှု receptors မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် (93, 94)။ အဓိကအားမှတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ကြောင်း Neuroactive steroids N-methyl-D-aspartate သို့မဟုတ် gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) receptors DHEAS conjugation အဖြစ်လူ့ပလာစမာထဲမှာအပေါများဆုံး Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သည့် adrenal အန်ဒရိုဂျင် DHEA, ပါဝင်သည် (95, 96, 97, 98)။ DHEA ကြွက် adrenal cortex အားဖြင့်လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်မထားဘူး: ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်လှုပ်ရှားမှုက၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ထင်ဟပ် (99)။ DHEA နှင့် pregnenolone, နှစ်ဦးစလုံး i "5, 3Î²-hydrosteroids လည်း opioid Sigma အဲဒီ receptor agonists ဖြစ်ကြသည်အဓိကချို့ယွင်းသော်လည်း, အရာ "ဟုကျနော်ရှိပါတယ်4, 3-One ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုရန်ဖြစ်ပါသည် (100)။ သူတို့ရဲ့ Sigma-1 agonist လုပ်ရပ်များမှတဆင့် DHEA သို့မဟုတ် pregnenolone နှင့်အတူ pretreatment ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) အပြုအမူ potentiates (100) ဒါပေမယ့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ attenuates (101)။ လူနာများတွင် DHEA နှင့် DHEAS ကင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက်အကျိုးရှိသောလုပ်ရပ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် (102, 103)နှင့် opioid ဆုတ်ခွာကူညီပေးဖို့ DHEA အုပ်ချုပ်ရေး၏အသုံးပြုမှုကို variable ကိုရလဒ်များနှင့်အတူလေ့လာခဲ့ပြီး (104, 105).
အခြားအလူသိများ neurosteroids 3Î -hydroxy-5Î± -pregnan-20-One (tertrahydroprogesterone, allopregnanolone, THP) နှင့်3Î±, 21-dihydroxy-5Î± -pregnan-20-One (tetrahydrodeoxycorticosterone, THDOC) နှင့်သူတို့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်±ပါဝင်သည် အဓိကချို့ယွင်းခြင်းနှင့် deoxycorticosterone ကနေဦးနှောက်ထဲမှာ (106, 107)။ သူတို့ဟာ anxiolytic, Anti-တက်ခြင်းနှင့်သက်သာစေသောဆေးလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်နှင့်ကြွက်များတွင်အီသနောတုန့်ပြန်ပလာစမာများနှင့်ဦးနှောက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ခြီးမွှောကျခံရဖို့လူသိများကြသည် (106, 108)။ ထို့အပြင် HPA ဝင်ရိုးဟာ hypothalamic အဆင့်မှာလုပ်သူများဂါဘမြို့သားတားစီးအောက်မှာဖြစ်ပါတယ် (75)။ အရေးကြီးတာက, THP နှင့် THDOC နှစ်ဦးစလုံး၏ဦးနှောက်အတွက်ထုတ်လုပ်မှု adrenal မူရင်းရှေ့ပြေး steroids အပေါ်မူတည် (106).
အဆိုပါ corticosteroids သူတို့ကိုယ်သူတို့အာရုံကြောသက်ရောက်မှုရှိသည်, corticosterone ၏ဦးနှောက်ပြင်းအားဆက်ဆက်အထီးကြွက်များတွင်စွဲလမ်းအပြုအမူမှဆက်စပ်မှုရှိ (109)နှင့်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ သို့သော် corticosteroids ၏ဒေသခံဦးနှောက်ပေါင်းစပ်၏ဆက်စပ်မှုမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆက်, လက်စထရောကနေ corticosteroid biosynthetic လမ်းကြောင်းအပေါငျးတို့သလိုအပ်သောအင်ဇိုင်းတွေအတူတကွ Star ပရိုတိန်းနှင့်အတူအထူးသ hippocampus အတွက်ပစ္စုပ္ပန်များမှာ (110, 111, 112)ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်မှု၏သူတို့ရဲ့ level သည်bloodâ€ "ဦးနှောက်အတားအဆီးဖြတ်ကျော်ပြင်းအားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်, သူတို့မဆိုအကြီးအတိုင်းအတာအထိဦးနှောက်အတွက်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ထင်ကြသည်မဟုတ် (113, 114)။ အဆိုပါ adrenal cortex: ထူးခြားဖြစ်လျှင်, လူသိများ neurosteroids ၏, ထို corticosteroids တစ်ခု extraneural အရင်းအမြစ်အပေါ်အများစုမှီခိုဖြစ်ခြင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တစ်စုထဲသို့ကျပေမည်။
အဆိုပါ adrenal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို
ရှင်းနေသည်မှာစွဲအတွက် corticosteroids ၏အခန်းကဏ္ဍကို corticosteroids သူတို့ကိုယ်သူတို့၏လုပ်ရပ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ရှုထောင့်၏သဘောသဘာဝကိုကိုးကားခြင်းမရှိဘဲနားလည်သဘောပေါက်မရနိုင်ပါ။ အဆိုပါ corticosteroids ပထမဆုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်အဖြစ်ညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ပေမဲ့နီးပါးလူသားများအတွက် Euphoria ပီတိနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှစ်ဦးစလုံး generate ၎င်းတို့၏ဝိရောဓိစွမ်းရည်ကိုကောင်းစွာသိထားပြီး (115, 116)။ ခံစားချက်အတွက်အပြောင်းအလဲများရေရှည်အတွက်ပျော့တိုအသုံးအနှုန်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုအတွက်တိုးမြှင့်အတွက် Euphoria ပီတိ, ဒါမှမဟုတ်ပင်စိတ္တနှင့်အတူ, နာတာရှည် corticosteroid ကုထုံးတစ်ခုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤအမျိုးသမီးများအတွက်အများဆုံးမကြာခဏဖြစ်ပေါ် (116, 117, 118, 119, 120)ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများအတွက်ဖြစ်ပွားမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုနှင့်အတူပေမယ့်။ ထိုမှတပါး, နှစ်ဦးစလုံး cortisol ပမာဏနှင့် ACTH ဖို့တုန့်ပြန်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ (121)နှင့်တိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်ဤအရာနှစ်ခုလုံးကိုအမြင့်ဆုံး CRH လျှို့ဝှက်ချက်များကိုချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါပြသ (29)။ ဒါဟာ corticosteroids dopamine-related စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည် (122)နှင့်လည်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတချို့အမူအကျင့် features တွေ corticosteroids မြွက်စေခြင်းငှါဦးနှောက်အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများသို့မဟုတ်အခြားအပြောင်းအလဲများကနေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ခဲ့, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ပါသည် (114, 123, 124)။ အခြားအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ် corticosteroid အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏လျှော့ချရေး, anxiolytic ကုထုံးတုံ့ပြန်များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်ကိုလည်းသုံးနိုငျ (125, 126)။ ဒါဟာ HPA လှုပ်ရှားမှုတိုးလာဤအရပ်, ထို hypothalamus မှာချို့ယွင်း glucocorticoid တုံ့ပြန်ချက်မှမြင့်တက်ပေးခြင်း, တကယ်တော့စိတ်ကျရောဂါထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း desensitization ထင်ဟပ်ကြောင်း postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ model များတွင်စိတ်မကျဆေး Antidepressants တစ်ဦးအရေးယူထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု resensitize ဤသို့ဖြစ်ပါသည် (125), monoamine reuptake အပေါ်သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လွတ်လပ်သော, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်း Multi-မူးယစ်ဆေးခုခံ, P-glycoprotein အမြှေးပါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များမှတဆင့်ဆဲလ်ကနေ Steroid တစ်မျိုးဖျက်သိမ်းရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ (127, 128)။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ corticosteroid-evoked စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကိုစွဲမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ adrenal cortex နဲ့စွဲအကြားအစောပိုင်းကအသင်းအဖွဲ့ထားရာမှအကြီးအကျယ်ဆင်းသက်လာပေမယ့်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုဖေါ်ပြခြင်း data ကိုယခုရှိပါသည်။ နာတာရှည် Steroid တစ်မျိုးကုသမှုကိုလက်ခံရရှိလူနာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုထံမှအချို့သောစာရေးဆရာများသူတို့ကိုယ်သူတို့စွဲ၏မူးယစ်ဆေးအဖြစ် corticosteroids တံဆိပ်ကပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြပြီ (129, 130, 131, 132, 133, 134)အဆိုပါအစောပိုင်းကအထောက်အထားပေမယ့်များများစားစားတစ်ဦးချင်းအမှုအစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် corticosteroids နှင့်စွဲအကြားနီးကပ် link ကိုရှိရှိကွှေးကျွောပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအားဖြင့်အထဲကဘွားတစ်ဦးအယူအဆအကြံပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အရက်အုပ်ချုပ်ရေးအထီးကြွက်များတွင် ACTH လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အရှင် adrenocortical ဆွ induces (106)။ high- သော်လည်းမနိမ့်နီကိုတင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်လေ့ယောက်ျားအတွက်, တိုးမြှင့်ပလာစမာ ACTH နဲ့ Cortisol ဆေးလိပ်သောက်၏မိနစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ် (135)။ မြင့်မားသော cortisol ၏အရေးပါလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား abstinent ကင်း-မှီခိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ချို့ယွင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အားဖြင့်ပေးထား (136)အဆင့်မြင့် Basal cortisol ပမာဏကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်တိုးတက်လာသောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ပေမယ့်။ မှတ်ဉာဏ်ပေါ်ဤအကြောင်းသက်ရောက်မှုပုံ inverted ဦး-shaped cortisol တုံ့ပြန်မှုကွေးရောင်ပြန်ဟပ်; အနိမ့်အဆင့်ဆင့်မှာတိုးလာ cortisol hippocampal သိမြင်တုံ့ပြန်မှုမှအကျိုးရှိပေမယ့်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး (137)။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် cortisolaemia နှင့်စိတ်ဓါတ်များအဆိုးမြင်စိတ်တွေအဆိုပါဒီဂရီအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်စိတ်ကြွဆေးအပြီးတိုးမြှင့် positive ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် (138).
ထို့အပွငျအများကြီးစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား (တွေ့မြင်အထွေထွေ concept ကိုထောကျပံ့ စားပွဲတင် 1) ။ မှီခိုအချို့ကိုဒီဂရီအကြံပြုတဲ့ထုံးစံ၌အထီးကြွက်လည်း Self-စီမံခန့်ခွဲ corticosterone (139, 140)။ ထို့ကြောင့် de Jong က et al. (141) adrenalectomized အထီးကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်း adrenaline နှင့် corticosterone နှစ်ဦးစလုံး၏အစားထိုးခြင်းဖြင့်ပွနျလညျထူထောငျနှင့် cocaine- သို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်အရက်-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း inhibitor ၏ရှေ့တော်၌ inhibited နေကြသည်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ (142)။ corticosteroid ပေါင်းစပ်ပိတ်ဆို့လျှင်ထို့အပြင်, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလည်းအချို့သောစာရေးဆရာများအဆိုအရ relapses (143)။ dexamethasone မပေမယ့်အခြားသူများကို mineralocorticoid အဲဒီ receptor (NR3C2, MR) ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်း, corticosterone relapse နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောပြောင်းပြန်ရှာတွေ့ (144)။ ထိုသို့သောဆိုးကျိုးများ, antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများသူတို့ကဲ့သို့ပင် mesolimbic dopaminergic စနစ်ကတဆင့်ကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ (145, 146)။ ဒါဟာမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ dopamine-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု glucocorticoid receptors မလိုအပ်ကြောင်းသပိတ်မှောက်လျက်ရှိသည် (147).
စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များတွင်, စွဲလမ်းအတွက် corticosteroids ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများအတွက်အဓိပ္ပါယ်သက်သေအထောက်အထားကြီးများနှင့်အောက်တွင်-စကားရပ်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း၏ဆိုးကျိုးများအတွက်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အဓိကအားထား။ corticosterone အစားထိုးပြန်နေချိန်မှာကြွက်တွေမှာဦးနှောက်-တိကျတဲ့ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းကွယ်ပျောက်သွားစေ, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့နည်းသွား (148)။ တိကျတဲ့ dopaminoceptive အတွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းပြတ်တောက်သော်လည်းမ dopamine အာရုံခံကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့နည်းသွား (149), ဖြစ်စေအမျိုးအစားထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းပြတ်တောက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်နှင့်အတူကင်း-သွေးဆောင် CPP က, attenuates သော်လည်း (150)။ မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် CPP က hippocampal ပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်နျူကလိယထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း accumbens (151)။ အထီးကြွက်, ကိုကင်းမှမြင့်ာင်းအတွက် forebrain ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းရလဒ်များ overexpression အဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်အတွက် (152).
အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာအရက်အလွဲသုံးစားမှု၏စတင်နှင့်အတူအထူး alleles ၏အသင်းအဖွဲ့ထင်ရှားသောလူသားတွေအတွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း polymorphic ၏လေ့လာမှုများအတွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ၏သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ် (153)။ ဤရွေ့ကား, ယခု, အထူးသဖြင့်ကိုကင်းတုံ့ပြန်အတွက် corticosteroids နှင့်အတူစွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်ရောဂါလက္ခဏာလင့်ထားသည်အတွက်အကျဉ်းချုံးဖြစ်ကြောင်းထပ်မံစမ်းသပ် data တွေကို စားပွဲတင် 1.
Glucocorticoids နှင့်စွဲလမ်း။ ဤနေရာတွင်ရုပ်ပြအဖြစ် glucocorticoids ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများ, စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ခွင့်ရရှိထားသည်ဟုသိရသည်။ လူ့မျိုးစိတ်များထံမှသက်သေအထောက်အထားသွယ်ဝိုက်နှင့် circumstantial ဒါပေမယ့်တစ်ခုတိုးချဲ့ HPA ဝင်ရိုးများကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် glucocorticoids, စွဲလမ်း၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များကိုအခြေခံသောယေဘုယျကောက်ချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဦးနှောက် CRH, POMC, neurosteroids နှင့် HPA ဝင်ရိုး၏စွဲလမ်း၏မူးယစ်ဆေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒီရှားပါးပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုသောစမ်းသပ်တိရိစ္ဆာန်များ၏လိင်အမှန်တကယ်, မပေးသည်။ အထီးကြွက်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည် - - ကှဲလှဲ minimize ရန်စှဲလေ့လာမှုများမကြာခဏအတူတူလိင်၏တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ဖျော်ဖြေကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သျောလညျးစွဲများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထားလူ့ဘာသာရပ်များနှင့်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်စွဲဖို့ပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးယောက်ျားထက် relapse ပိုမိုအန္တရာယ်မှာ (154, 155), နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်အထီးကြွက်များထက်ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သိသိသာသာအထောက်အထား gonadal ဟော်မုန်းဤခ် (156).
adrenocortical ဟော်မုန်းအဖြစ်ကောင်းစွာဤနေရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုထင်ကြေးမှကောင်းသောအကြောင်းပြချက်လက်ထက်ရှိပါသည်။ လူသားများနှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံး adrenocortical function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရှိသည်, နှစ်ဦးစလုံးစွဲများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, သဘောသဘာဝအတွက်ကွဲပြားခြားနားပေမယ့်။
ACTH မှတုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်းလူသားမြားသညျတှငျ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက် cortisol ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမှာအများဆုံးမဖြစ်စလောက်များမှာ (96, 157, 158)။ သို့သော်ဂလင်း၏အဓိကထွက်ကုန်မှာအမှန်တကယ်အားဖြင့် DHEA ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ steroid အဖြစ်သာမက၊ အဓိကအားဖြင့်ဆာလဖိတ် DHEAS ကဲ့သို့ထုတ်ပေးသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူငယ်များတွင် DHEA နှင့် DHEAS ၏ပလာစမာပြင်းအားမှာ ၁၂ nM နှင့် ၁၀ μMအသီးသီးဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး ၈ ဦး နှင့် <၇ μMနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအသက်အရွယ်နှင့်အညီအဆင့်လျော့ကျသော်လည်းလိင်ကွဲပြားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ (96, 159, 160, 161).
အဆိုပါအချက်သည်ယခင်ကမှတ်ချက်ချအဖြစ် DHEA, စွဲလမ်း၏မူးယစ်ဆေးဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ cerebrospinal fluid ကနေသက်သေအထောက်အထား adrenal DHEA နှင့်ပင် DHEAS, သိသာထင်ရှားသောပမာဏသာရှိဦးနှောက်ကိုရောက်ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြု (162)ဤဦးနှောက်အတွင်းဖန်တီးပမာဏမှပြောပြတယ်ဘယ်လိုပေမယ့်အကဲဖြတ်မရနိုင်ပါ။ cerebrospinal fluid ကိုမလိင်ကွဲပြားမှုအစီရင်ခံခဲ့သော်လည်း, ကယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ပို DHEA ကာကွယ်မှုကိုရရှိကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်နေဆဲ (154, 162).
ကြွက်များတွင်အခြေအနေကကွဲပြားခြားနားကြောင်း, DHEA မရှိသိသာ adrenal လျှို့ဝှက်ချက်လည်းမရှိ။ သို့သော်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအတွက်လေးနက်ခြားနားချက်နှင့် corticosterone ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပြင်းအား (ထိုကြွက်များတွင်အဓိက glucocorticoid) သည်ရှိ၏, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး adrenals အထီးနီးပါးနှစ်ကြိမ်အရွယ်အစားများမှာ; နှင့် corticosterone ၏ output ကိုအချိုးကျ သာ. ကြီးမြတ်သည် (163, 164, 165, 166)။ အစောပိုင်းကမှတ်ချက်ချအဖြစ်, DHEA ကြွက်ဦးနှောက်အတွက်ဖန်တီးသော်လည်းမရှိသလိင်ခြားနားချက်ဖြစ်တယ်, ဦးနှောက်ပြင်းအားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဆင်တူ (167)။ ထို့ကြောင့်ကြွက်အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးများတွင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှကြီးထွား sensitivity ကို corticosterone ၏မြင့်မားပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။
အဆိုပါ adrenal, စွဲလမ်းနှင့်နာရီ
က HPA-modulated စွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များများအတွက်အရေးပါသော adrenal gland သူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ်လျှင်, adrenocortical တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်အတွက်ဆာများမှာအခြားအချက်များစွဲနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ adrenal cortex လှုံ့ဆော်သောဇီဝကမ္မလှုံ့ဆော်မှုများ, စိတ်ဖိစီးမှုအထင်ရှားဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် adrenal cortex တစ်ဦးအညီအမျှအစွမ်းထက်ထိန်းညှိနာရီဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်သတ်မှတ်ဒါကစိတ်ဖိစီးမှု, လူနာနဲ့တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စွဲနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်နေသည် (168, 169, 170, 171, 172)။ ဒီစာပေယေဘုယျအား HPA မှနည်းနည်းကိုကိုးကားထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်အထီးကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲတွင် pineal နှင့်က melatonin အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပြီးပေမယ့်ဒါဟာကြောင်းနာရီအချိန်သိပ်စွဲလမ်းတပ်မက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်မှတ်သားဖို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (173), ဒါမှမဟုတ်, အဓိကအား, နာရီမျိုးဗီဇအပေါ်။ PER1 အတွက်ကာလနှင့်ကိုကင်း sensitivity ကိုအထီးကြွက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောမျိုးကွဲများ၏ကြွက်တွေမှာဆက်စပ်နေကြသည် (174)မူးယစ်ဆေးဝါး reinstatement အထီးကြွက်များတွင် photoperiod အားဖြင့်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည် (175)နှင့်နာရီဗီဇမျိုးကွဲအတွက်ကင်းာင်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် Drosophila (176) ကြွက် (လိင်မပေးသော) တွင်စွဲနှင့်ဝသကဲ့သို့ (177) လူသားများတွင်အချို့သောစာရေးဆရာများနှင့်အညီ (178, 179, 180, 181) ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ် (182)။ အမျိုးသားများတွင်တစ်ဦး 26 နာရီကာလအတွင်းအရက်သောက်မက melatonin မ cortisol အတွင်းသို့ diurnal အပြောင်းအလဲထိခိုက် (183, 184).
အဆိုပါ adrenal ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ခဲစွဲသို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက် ဆက်စပ်. အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း adrenocortical function ကိုတစ်ခုမှာအင်္ဂါရပ်, glucocorticoid ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဒေသခံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့ပုံပေါ်ခွယန္တရားများတည်ရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ CRH ထိုသူတို့တွင်သိသာသည်။ အဆိုပါ adrenal အတွက်ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထား hypothalamic CRH နှင့် CRH ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးသည်လက်ရှိတွင်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ corticosteroid Secret အပေါ် CRH ၏တိုက်ရိုက် stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ်များ၏ adrenal gland splanchnic အာရုံကြောနှိုးဆွတုံ့ပြန်အတွက် medulla ကနေ CRH secrete စေခြင်းငှါ, ပြသထားသည် (185, 186, 187, 188)။ ဘယ်လို adrenal CRH စွဲနှင့်အတူကွဲပြားရသနည်း ဒါဟာအနာဂတ်များအတွက်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို HPA activation ၏ဆက်ဆံရေးအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအားလုံးဘုံရှိကဘာလဲ? ဤမျှလောက်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ခါတစ်ရံ adrenal cortex တစ်ခုစွဲနှင့် glucocorticoids ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွစျဖို့ထင်ရှားစေခြင်းငှါအဘယျသို့ပို့ဆောင်တဲ့စညျးလုံးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား?
တဦးတည်းအချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာနေသည်: ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်က်ဘ်ဆိုက်များမှာ CRH နှင့် POMC (ထိုဂန္ HPA နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လင့်များရှိသဖန်းသီး။ 1) နှင့်အတူတကွ, သူတို့စွဲလမ်းအပြုအမူအခြေခံသောလိုက်လျောညီထွေအလားတူအခန်းကဏ္ဍ play လိမ့်မည်။ သူတို့ကအစိတ်အပိုင်း adrenal cortex သူ့ဟာသူဖြစ်ပါသည်, သော terminal ကိုတစ်ခုတိုးချဲ့ HPA အဖြစ်စွဲလမ်း၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အရေးပါနိုင်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့် reinstatement အတွက်အပြုအမူနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအတွက် adrenal cortex နဲ့ glucocorticoids ၏သော့အရေးပါမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများအပြီးသတ်သောပုံရသည်။ ယင်း၏အဲဒီ receptor မှာ glucocorticoid လုပ်ဆောင်ချက် glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်သို့မဟုတ်တားစီး၏ကုထုံးထိန်းချုပ်မှုအရေးကြီးသောအနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်သည် (148, 189) မဟုတ်ရင်တစ်ဖှယျကုထုံးရှုခင်းသည်အဘယ်အရာအတွက် (48, 189, 190, 191).
အဆိုပါစာရေးဆရာပြန်လည်သုံးသပ်၏ဘက်မလိုက်မှု prejudicing အဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်အကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခဖြစ်ရှိကွောငျးကိုကွားပွော။
ရရှိထားသည့် 24 မေလ 2013
လက်ခံ 31 မေလ 2013
တစ်ခုလက်ခံထား Preprint 31 မေလ 2013 အဖြစ်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်လုပ်
© 2013 ရေးသားသူ
ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်အောက်မှာလိုင်စင်ရဖြစ်ပါတယ် ကို Creative Commons Attribution 3.0 Unported License ကို
Lewis က JT
။ နှစ်ဆ adrenalectomy ပြီးနောက် albino ကြွက်များတွင် intoxication ဖို့နည်းမနော။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် 1923 64 506-511 ။
။ မူးယစ်ရန် adrenalectomized ကြွက်၏ဖြစ်ပေါ်နိုင်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1929 35 67-74 ။
။ အဆိုပါ adrenal cortex မှဝယ်ယူမော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်များ၏စပ်လျဉ်း။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1931 43 51-60 ။
။ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကံကြမ္မာ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်လေ့လာရေးနှင့်ဃ၏ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု, ဌ-methadone မူးယစ်ဆေးသည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1953 107 12-23 ။
။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ cortisone နှင့်အတူဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေစီမံခန့်ခွဲမှု။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တပ်မတော်နေ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ် 195121347-1351 ။
။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအတွက် Hypoadrenocorticism ။ သက်ကြီးရွယ်အိုကုသစောင့်ရှောက် 195161-11 ။
Fraser HF နှင့်
Isbell H ကို
။ ယင်းမော်ဖင်းအကိုက် abstinence syndrome ရောဂါ၏ကုသမှု cortisone နှင့် ACTH ၏ပျက်ကွက်။ ပြည်တွင်းဆေးပညာ၏ရာဇဝင် 1953 38 234-238 ။ (doi:10.7326/0003-4819-38-2-234).
။ eosinophil chemotaxis နှင့်လိုက်နာမှုအပေါ် corticosteroids ၏ဆိုးကျိုးများ။ လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ် 1981 67 28-36 ။ (Doi: 10.1172 / JCI110024).
။ ရန်သည်းခံစိတ်နှင့် opiates, barbiturates, နှင့်အရက်အပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို။ ဆေးပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 1957 8 427-440 ။ (Doi: 10.1146 / annurev.me.08.020157.002235).
။ မော်ဖင်းအကိုက်မှစွဲလမ်းနေတဲ့သံသရာစဉ်အတွင်း urinary 17-ketosteroid မစင်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1958 124 305-311 ။
။ မော်ဖင်းအကိုက်မှစွဲလမ်းနေတဲ့သံသရာစဉ်အတွင်း 17-hydroxycorticosteroids ၏ urinary မစင်နဲ့ပလာစမာအဆင့်ဆင့်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1961 132 226-231 ။
Hochberg Z ကို,
။ endocrine ဆုတ်ခွာ syndrome ။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 2003 24 523-538 ။ (Doi: 10.1210 / er.2001-0014).
လွိုက် RB &
။ ကုထုံးဂယက်: စိတ်ကျရောဂါ၏ pathophysiology အတွက် corticotropin-releasing ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒအတွက်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များ 2011 11 609-617 ။ (Doi: 10.2174 / 1568026611109060609).
။ လူသားတွေအတွက် Corticotropin-releasing ဟော်မုန်း။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 1992 13 164-191 ။
ချန် R ကို,
Lewis က ka,
။ လူသားတစ်ဦး corticotropin-releasing-Factor အဲဒီ receptor ၏ expression ကိုယ်ပွား။ PNAS 1993 90 8967-8971 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.90.19.8967).
Vita N ကို,
Laurent P ကို,
Lefort S က,
Chalon P ကို,
Kaghad M က,
le သားမွေး, G,
Ferrara P ကို
။ မူလတန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မောက်စ် pituitary နှင့်အချက် receptors လွှတ် corticotrophin လူ့ဦးနှောက်၏အလုပ်လုပ်စကားရပ်။ FEBS ပေးစာ 1993 335 1-5 ။ (doi:10.1016/0014-5793(93)80427-V).
Mitchell က AJ
။ အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်: စိတ်ကျရောဂါနာမကျန်းအတွက်အချက်တစ်ချက်လွှတ် corticotropin ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 1998 22 635-651 ။ (doi:10.1016/S0149-7634(97)00059-6).
Sarnyai Z ကို,
။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် corticotropin-releasing အချက်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Pharmacological ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 2001 53 209-243 ။
။ အဆိုပါ amygdala နှင့်စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကို။ ဦးနှောက်သုတေသန 2009 1293 61-75 ။ (Doi: 10.1016 / j.brainres.2009.03.038).
Aguilera, G &
လျူ Y ကို
။ CRH အာရုံခံ၏မော်လီကျူးဇီဝြဖစ်စဉ်။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 2012 33 67-84 ။ (Doi: 10.1016 / j.yfrne.2011.08.002).
Spina M က,
Chan က RK,
Rivier J ကို,
Wale W &
။ urocortin ၏အစာစားချင်စိတ်-နှိပ်ကွပ်သက်ရောက်မှုတစ်ခု CRF-related neuropeptide ။ သိပ္ပံ 1996 273 1561-1564 ။ (Doi: 10.1126 / science.273.5281.1561).
ယုပ္ပေ M က,
Carmouche M က,
Cullen က MJ,
ဘရောင်း B က,
Murphy က B ကို,
Foster AC အ
။ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အခန်းက္ပ CRF အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါလာဖို့ syndrome ရောဂါအတွက် receptors ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 2000 293 799-806 ။
Livanov V ကို,
Spencer K သည်,
Lesher T က,
Maciag ကို C,
။ အချက်-2 အဲဒီ receptor ထုတ်ဦးနှောက် corticotropin ၏ antisense တားစီးနေဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ attenuation ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန 2001 89 29-40 ။ (doi:10.1016/S0169-328X(01)00050-X).
။ CRF ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (2) receptors စိုးရိမ်စိတ်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် anxiolytic အပြုအမူထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန 2001 902 135-142 ။ (doi:10.1016/S0006-8993(01)02405-2).
။ စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းအတွက် CRF နှင့် CRF-related peptides ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက်သုတေသန 2010 1314 3-14 ။ (Doi: 10.1016 / j.brainres.2009.11.008).
။ ကိုကင်းအားဖြည့်အတွက်တစ်ဦးက neuroendocrine အခန်းကဏ္ဍ။ Psychoneuroendocrinology 1997 22 237-259 ။ (doi:10.1016/S0306-4530(97)00027-9).
။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်။ Psychoneuroendocrinology 2002 27 13-33 ။ (doi:10.1016/S0306-4530(01)00034-8).
။ ရှည်လျားသော-access ကိုအခြေအနေများအောက်တွင် Daily သတင်းစာကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပလာစမာ corticosterone အတွက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း-သွေးဆောင်တိုးကြီးထွားများပြားစေခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် glucocorticoid အဲဒီ receptor-mediated အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ချို့ယွင်း။ ဦးနှောက်သုတေသန 2007 1167 101-111 ။ (Doi: 10.1016 / j.brainres.2007.05.080).
Taves S က,
Khan က T က,
Sajan T က,
ကူလင်တန် WE &
။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း-သွေးဆောင် corticosterone လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် hypothalamic CRH mRNA စကားရပ်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကလုပ်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ neuroscience ပေးစာ 2007 415 269-273 ။ (Doi: 10.1016 / j.neulet.2007.01.036).
Erb S က,
။ Corticotropin-releasing အချက်, ဒါပေမယ့် corticosterone, ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ-ရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်မဟုတ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 1997 17 2605-2614 ။
Hard S က,
Juzytsch W က,
Watchus J ကို,
ရှယ်လပ် ဦး &
။ ကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက် corticotrophin-releasing အချက်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology 2000 150 317-324 ။ (Doi: 10.1007 / s002130000411).
Croft က AP,
။ အဆိုပါ hypothalamopituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့်အရက် preference ကို။ ဦးနှောက်သုတေသနသတင်းလွှာ 2005 68 171-178 ။ (Doi: 10.1016 / j.brainresbull.2005.08.006).
Baumgardner J ကို,
Sierra J ကို,
Bohr က C,
။ ထပ်ခါတလဲလဲရှည်လျား-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း Adrenal လှုပ်ရှားမှုကြွက်များတွင်အကြာတွင် CRF-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် CRF-မှီခိုဖိအား-သွေးဆောင် reinstatement ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ Neuropsychopharmacology 2011 36 1444-1454 ။ (Doi: 10.1038 / npp.2011.28).
Shen PH သည်,
Ducci က F,
လျူ J ကို,
Albaugh B က,
Hodgkinson, CA &
။ EEG, အရက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်ဘုံမျိုးဗီဇဇစ်မြစ်: CRH-BP ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ PLoS ONE 20083e3620 ။ (Doi: 10.1371 / journal.pone.0003620).
ray LA က
။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာသောက်များတွင်အရက်များအတွက် cue-သွေးဆောင်တဏှာ: အ OPRM1 နှင့် CRH-BP ဗီဇအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇဖြည့်ညှင်း၏ပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ အရက်, လက်တွေ့များနှင့်စမ်းသပ်သုတေသန 2011 35 166-174 ။ (Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2010.01333.x).
zhou Y ကို,
Franck J ကို,
Spangler R ကို,
။ နာတာရှည်, နေ့စဉ် "မူးရူး" intragastric အရက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် hypothalamic POMC နှင့် anterior pituitary CRF1 အဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ။ အရက်, လက်တွေ့များနှင့်စမ်းသပ်သုတေသန 2000 24 1575-1582 ။
Lee က SY,
။ အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး acute အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလှုံ့ဆော်ပေမယ့်အရက်မှီခိုနေတဲ့လြော့ neuroendocrine ပြည်နယ်စေပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 2008 28 1641-1653 ။ (Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2008.06455.x).
Tiefenbacher S က,
။ ရှဉ့်မျောက်များအတွက်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement အတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology 2003 168 177-183 ။ (doi:10.1007/s00213-003-1391-4).
ဘာကင်ဟမ် JC &
Cooper က TA
။ ကြွက်များတွင်အချက်လွှတ် corticotrophin ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလွှမ်းမိုး opioid receptors ၏ Pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Neuroendocrinology 1986 44 36-40 ။ (Doi: 10.1159 / 000124618).
Tsagarakis S က,
။ ကြွက် hypothalamus ထံမှ CRF-41 လွှတ်ပေးရေး Opiate အဲဒီ receptor မျိုးကွဲစည်းမျဉ်း စသည်တို့အတွက်. Neuroendocrinology 1990 51 599-605 ။ (Doi: 10.1159 / 000125397).
Kreek MJ, Borg L, Zhou Y & Schluger J. endocrine လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာရောဂါများအကြားဆက်နွယ်မှု - မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ဘိန်းဖြူနှင့်ဆက်စပ်သောတိုတောင်းသောသရုပ်ဆောင် opiates များသည်မက်သဒွန်နှင့်စွဲခြင်း၏ဆေးဝါးကုထုံးတွင်အသုံးပြုသောအခြားရှည်လျားသောသရုပ်ဆောင်သည့် agonists များနှင့်ခြားနားသည်။ In ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ, 2nd edn, စစ 781-829 ။ Eds DW Pfaff၊ AP Arnold၊ AM Etgen, RT Rubin & SE Fahrbach ။ San Diego မှ, CA: Elsevier, 2002
။ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူစူးရှခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကုသမှုပြီးနောက်ကြွက်များတွင် hypothalamo-pituitary-adrenocortical လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွာခြားချက်များ။ Neuroendocrinology 1984 38 411-417 ။ (Doi: 10.1159 / 000123927).
။ ကြွက်များ၏ hypothalamus နှင့် pituitary အတွက် Hypothalamic-pituitary-adrenal လှုပ်ရှားမှုနဲ့လိုလားသူ opiomelanocortin mRNA အဆင့်ဆင့် differential ရေကန့်သတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲစူးရှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့် modulated နေကြသည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ် 1999 163 261-267 ။ (Doi: 10.1677 / joe.0.1630261).
Newman က AE,
Erb S က
။ cannabinoid 1 receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း corticotropin-releasing အချက်နှင့်ကိုကင်းဆုတ်ခွာ၏ဗဟိုထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူနောက်ကြောင်းပြန်။ neuroscience 2012 204 125-133 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2011.07.022).
။ ကြွက်များတွင် hypothalamo-pituitary-adrenocortical လှုပ်ရှားမှုအပေါ် naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuroendocrinology 1986 42 421-426 ။ (Doi: 10.1159 / 000124481).
Navarra P ကို,
Besser က M,
Navara P ကို
။ မော်ဖင်းအကိုက်တိုက်ရိုက်ကြွက် hypothalamus ကနေနှိုးဆွ corticotrophin-releasing အချက်-41 များလွှတ်ပေးရန် modulates စသည်တို့အတွက်. ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 1989 124 2330-2335 ။ (Doi: 10.1210 / endo-124-5-2330).
။ Opioids နှင့်အရက်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ 2004 81 339-358 ။ (Doi: 10.1016 / j.physbeh.2004.02.008).
Heilig M က,
။ Pharmacogenetic အရက်စွဲ၏ကုသမှုမှချဉ်းကပ်။ သဘာဝတရားပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ neuroscience 2011 12 670-684 ။ (Doi: 10.1038 / nrn3110).
။ မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်း, ဘုံရလဒ်ကို: စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ activation ။ Pharmacological သိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2010 31 318-325 ။ (Doi: 10.1016 / j.tips.2010.04.005).
Zhang က X ကို,
။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အရက်ထိတွေ့မှုနှင့်သန္ဓေသားပရိုဂရမ်: neuroendocrine နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ စမ်းသပ်ဇီဝဗေဒနှင့်ဆေးပညာ 2005 230 376-388 ။
Allen က CD ကို,
Lee က SY
။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရက်ထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများဗဟိုဦးနှောက်ဆားကစ်ပွောငျးလဲ။ neuroscience 2011 182 162-168 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2011.03.003).
Damadzic R ကို,
Ciccocioppo R ကို,
Heilig M က
။ corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor 1 (CRH1R) ၏ Pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမဟုတ်သောမှီခို Wistar ကြွက်များတွင်မြင့်မားသောအရက်ပြင်းအားများဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 2012 100 522-529 ။ (Doi: 10.1016 / j.pbb.2011.10.016).
သင်းအုပ်ဆရာ R ကို,
Scibelli AC အ,
Burkhart-Kasch S က,
Stenzel-Poore အမတ် &
။ အီသနောမှအမူအကျင့် neuroadaptation အတွက် Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: တစ် urocortin1-လွတ်လပ်သောယန္တရား။ PNAS 2008 105 9070-9075 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.0710181105).
Li က J ကို,
။ စိတ်ကြွဆေးမှ locomotor sensitivity ကိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်စနစ်ကပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ခှဲစိတျ။ မျိုးဗီဇ, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ 2012 10 78-89 ။ (Doi: 10.1111 / j.1601-183X.2010.00641.x).
Bertagna X ကို
။ Proopiomelanocortin, မျိုးစုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ polypeptide ရှေ့ပြေး: ဇီဝြဖစ်စဉ်ကနေရောဂါဗေဒအခြေအနေများဖြစ်သည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဥရောပဂျာနယ် 2003 149 79-90 ။ (Doi: 10.1530 / eje.0.1490079).
။ ဗဟို melanocortin စနစ်၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်စည်းမျဉ်း။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ 2005 8 571-578 ။ (Doi: 10.1038 / nn1455).
။ murine hypothalamic proopiomelanocortin အာရုံခံ၏ဆွေမျိုးနံပါတ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးကွဲပြားပစ်မှတ်က်ဘ်ဆိုက်များ innervating ။ PLoS ONE 20116e25864 ။ (Doi: 10.1371 / journal.pone.0025864).
Starowicz K သည်,
Bilecki W က,
။ Melanocortin4အဲဒီ receptor အဆိုပါ dorsal အမြစ် ganglions နှင့်ချ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် neuropathic ကြွက်များတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ neuroscience ပေးစာ 2004 358 79-82 ။ (Doi: 10.1016 / j.neulet.2003.12.096).
Bergland R ကို,
Blume H ကို,
မော်နီကာ P &
Paterson R ကို
။ Adrenocorticotropic ဟော်မုန်းကဦးနှောက်ဖို့ pituitary မှတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သိပ္ပံ 1980 210 541-543 ။ (Doi: 10.1126 / science.6252607).
Kapcala LP သို့
Reichlin S က
။ အဆိုပါ ventral hypothalamus ပြင်ပတွင်ဦးနှောက်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက် immunoreactive ACTH ၏မူလအစ။ Neuroendocrinology 1983 37 440-445 ။ (Doi: 10.1159 / 000123590).
။ စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ပလာစမာများနှင့် CSF နဲ့အတူ Endorphins အဆင့်ဆင့်အကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လင့်များ: အားနည်းချက်ကို-ARMA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Peptides 19856(ပျော့ပျောင်း 1) 5-10 ။ (doi:10.1016/0196-9781(85)90004-X).
Twyman RM ။ နို့တိုက်ကျွေးရေး / စွမ်းအင်ဟန်ချက်၏ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ဦးနှောက်မှဟော်မုန်းအချက်ပြ။ တွင် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏စွယ်စုံကျမ်း, စစ 1201-1206 ။ Ed က LR Squire ။ အောက်စဖို့ဒ: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, 2009
Marcinkiewicz M က,
နေ့ R ကို,
Chretien M က
။ အဆိုပါ prohormone ၏ Ontogeny မောက် hypophysis နှင့် corticotropin နှင့်α-melanotropin နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ colocalization အတွက် PC1 နှင့် PC2 convertases ။ PNAS 1993 90 4922-4926 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.90.11.4922).
Allen က RG,
ဖုန်ကြားရှင် B က,
Miller က ED,
။ လိုလားတဲ့ orphanin FQ / nociceptin နှင့်ချွတ်ယွင်း prohormone convertase2ဖော်ပြကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက်လိုလားတဲ့ opiomelanocortin-ဆင်းသက်လာ peptides ၏ပြောင်းလဲအပြောင်းအလဲနဲ့။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 2001 21 5864-5870 ။
။ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်ဖြန့်ဝေအာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု: hindbrain နှင့် hypothalamus ထံမှပံ့ပိုးမှုများကို။ အဝလွန်ခြင်း 2006 14 (ပျော့ပျောင်း 5) 216S-221S ။ (Doi: 10.1038 / oby.2006.312).
။ proopiomelanocortin ၏အခန်းကဏ္ဍကို (POMC) နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအတွက် neurones ။ အာဟာရနှင့်ဇီဝြဖစ် 2007418 ။ (doi:10.1186/1743-7075-4-18).
Donato J ကိုဂျူနီယာ,
လင်း P ကို,
Scott ဟာ MM
။ POMC အာရုံခံအပေါ်တိုက်ရိုက် leptin အရေးယူကြွက်တွေမှာဂလူးကို့စ homeostasis နှင့် Hepatic အင်ဆူလင် Sensitivity ကိုထိန်းညှိ။ လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ် 2012 122 1000-1009 ။ (Doi: 10.1172 / JCI59816).
Dahmen M က,
Xu L ကို
။ Leptin နှင့် hypothalamo-pituitary-adrenal စိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး။ အထွေထွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 2012 177 28-36 ။ (Doi: 10.1016 / j.ygcen.2012.01.009).
။ Melanocortins နှင့် opiate စွဲ။ ဘဝကသိပ္ပံ 1997 61 1-9 ။ (doi:10.1016/S0024-3205(97)00029-5).
Obara ငါ &
Przewlocka B ကို
။ သူတို့ရဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးနောက်သည်းခံစိတ်၏ကြွက် amygdala နှင့်ကို attenuation အတွက် MC4 နှင့် CRF အဲဒီ receptor mRNAs အပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန 2003 990 113-119 ။ (doi:10.1016/S0006-8993(03)03444-9).
။ ကျောရိုး melanocortin အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်၏တားစီး။ နာခြင်း 2005 117 401-411 ။ (Doi: 10.1016 / j.pain.2005.07.003).
။ HS014 တစ်ဦးရွေးချယ် melanocortin-4 (MC4) အဲဒီ receptor ရန်, micemodulates အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကြွက်တွေမှာမော်ဖင်းအကိုက်များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ modulates ။ Psychopharmacology 2005 180 279-285 ။ (Doi: 10.1007 / s00213-005-2166-x).
Hsu R ကို,
။ melanocortin ဂီယာ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကင်းဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 2005 21 2233-2242 ။ (Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2005.04038.x).
Chopde မှန် CT &
။ neuroanatomical-အပြုအမူဆက်စပ်မှု: ကြွက်များတွင် differential ကိုအီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ဆုတ်ခွာ related စိတ်ကျရောဂါအတွက်α-melanocyte လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (α-MSH) ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန 2008 1216 53-67 ။ (Doi: 10.1016 / j.brainres.2008.03.064).
။ ဆန်းစစ်ခြင်း: အ hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းကို non-glucocorticoid inhibitors ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ် 1999 160 169-180 ။ (Doi: 10.1677 / joe.0.1600169).
Tronche က F,
Kellendonk ကို C,
ဓာတ်ငွေ့ P ကို,
Anlag K သည်,
Orban ကို PC,
Bock R ကို,
။ လျှော့စိုးရိမ်စိတ်အတွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ရလဒ်များကိုအတွက် glucocorticoid receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏နှောင့်အယှက်။ သဘာဝတရားမျိုးရိုးဗီဇ 1999 23 99-103 ။ (Doi: 10.1038 / 12703).
Boyle အမတ် &
။ forebrain- နှင့် amygdala-တိကျတဲ့ glucocorticoid အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇပြတ်တောက်၏ mouse ကိုမော်ဒယ်များမှသည်အပြုအမူထိုးထွင်းသိမြင်။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 2011 336 2-5 ။ (Doi: 10.1016 / j.mce.2010.11.011).
။ အဆိုပါ melanocortinergic လမ်းကြောင်းလျှင်မြန်စွာစိတ်ခံစားမှုဖိစီးနေဖြင့်စုဆောင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anorexia နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 2007 148 5531-5540 ။ (Doi: 10.1210 / en.2007-0745).
Kawashima S က,
Sakihara S က,
Kageyama K သည်,
နီဂွာရာ T &
Suda T က
။ CRF-လစ်လပ်ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးလေ့လာမှု: Corticotropin-releasing အချက် (CRF) α-melanocyte-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း၏စူးရှသောလာဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ Peptides 2008 29 2169-2174 ။ (Doi: 10.1016 / j.peptides.2008.09.010).
သေဆုံးသူ V ကို,
။ အာရုံခံဆဲလျ-တိကျတဲ့ proopiomelanocortin-လစ်လပ်ကြွက်များတွင် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်း dysregulation ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 2007 148 647-659 ။ (Doi: 10.1210 / en.2006-0990).
Fekete ကို C,
Huang က QH,
အီမာဆန် CH &
။ α-Melanocyte-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းအာရုံကြောဆိပ်ကမ်း၌ပါရှိသောသည် hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် thyrotropin-releasing ဟော်မုန်း-synthesizing အာရုံခံ innervating နှင့် prothyrotropin-releasing ဟော်မုန်းမျိုးဗီဇစကားရပ်၏အစာရှောင်ခြင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုကာကွယ်ပေးသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 2000 20 1550-1558 ။
။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamo-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်α-melanocyte-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းနှင့် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအကြားအပြန်အလှန်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 2003 23 7863-7872 ။
Perello M က,
။ α-MSH နှင့်γ-MSH အလယ်ပိုင်း melanocortin receptors မှတဆင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ IL-1βသွေးဆောင် activation တားစီး။ စည်းမျဉ်း Peptides 2004 122 185-190 ။ (Doi: 10.1016 / j.regpep.2004.06.011).
Hinkle pm တွင်
။ glucocorticoids အားဖြင့် endogenous melanocortin-4 အဲဒီ receptor စကားရပ်များနှင့်အချက်ပြ၏စည်းမျဉ်း။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 2006 147 5948-5955 ။ (Doi: 10.1210 / en.2006-0984).
ရမ်-Kiel J ကို,
Rune က GM က
။ အဆိုပါ hippocampus အတွက်အီစထိုဂျင်ပေါင်းစပ်။ cell များနှင့်တစ်ရှူးသုတေသန 2011 345 285-294 ။ (doi:10.1007/s00441-011-1221-7).
။ ကြွက် hippocampus အပေါ်အီစရိုဂျင်၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု။ neuroscience 2006 138 765-772 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2005.05.061).
Benvenuti S က,
Luciani P ကို,
Deledda ကို C,
Rosati က F,
Serio M က
။ sterols နှင့်လိင် steroids များ၏အာရုံကြောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်နယူးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို: အ seladin-1 / DHCR24 ပါရာဒိုင်း။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 2009 30 119-129 ။ (Doi: 10.1016 / j.yfrne.2009.03.006).
Walters က BJ
။ ဦးနှောက် aromatase ၏အာရုံကြောလုပ်ရပ်တွေကို။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 2009 30 106-118 ။ (Doi: 10.1016 / j.yfrne.2009.04.016).
Micevych P ကို,
Sinchak K သည်
။ Neuroprogesterone: အီစထိုဂျင်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်မှသော့ချက်? ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ 2008 57 470-480 ။ (Doi: 10.1016 / j.brainresrev.2007.06.009).
မက်က်အာ S က
။ ဦးနှောက်နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက် differential ကိုအရေးယူများအတွက်အခြေခံအတွက်အီစထိုဂျင်လုပ်ရပ်များ: လိင်-တိကျတဲ့ဆေးဝါးများအတွက်အမှု။ Pharmacological ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 2010 62 155-198 ။ (Doi: 10.1124 / pr.109.002071).
။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကြွက်၏ပုံစံတွင်စနစ်နှင့်ဗဟိုဇာစ်မြစ်ရှိလိင်စတီရိုဂျိုက်များ၏လွတ်လပ်သောလွှမ်းမိုးမှုများ - အက်စထရိုဂျင်များကလိင် - တိကျသောအာရုံကြောကာကွယ်မှုအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ 2010 57 23-34 ။ (Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2009.06.002).
zhou L ကို,
Bohm J ကို,
Jarry H ကို,
။ အဆိုပါ hippocampus အတွက်အီစထိုဂျင်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် synaptogenesis: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism Vivo အတွက် ဒါပေမယ့်မရ စသည်တို့အတွက်. Steroid တစ်မျိုးဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ၏ဂျာနယ် 2012 131 24-29 ။ (Doi: 10.1016 / j.jsbmb.2011.11.010).
။ အမြှေးပါး estrogen receptor နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ဇီဝြဖစ်စဉ်။ အဆိုပါ neuroscience အတွက် reviews 2008 19 413-424 ။ (Doi: 10.1515 / REVNEURO.2008.19.6.413).
။ metabotropic အချိုမှု receptors မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်အမြှေးပါး estrogen receptor: ဦးနှောက်ထဲမှာအီစထိုဂျင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုထွန်းသစ်စယန္တရား။ မော်လီကျူး Neurobiology 2008 38 66-77 ။ (Doi: 10.1007 / s12035-008-8034-z).
Corpechot ကို C,
Dray က F,
Emiliozzi R ကို,
Robel P ကို
။ တစ် ဦး adrenal-secreted "androgen": dehydroisoandrosterone sulfate ။ ၎င်း၏ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်လူ၌အခြား steroid conjugation ၏ဇီဝြဖစ်အပေါ်စမ်းသဘောယေဘူယျ။ ဟော်မုန်းသုတေသနအတွက်မကြာမီကတိုးတက်ရေးပါတီ 1965 21 411-500 ။
Vinson မိသားစုဆရာဝန်, Whitehouse BJ & Hinson JP ။ In အဆိုပါ Adrenal Cortex, ch 3, စစ 65-139 ။ Englewood Heights, NJ, USA: Prentice-ခန်းမ, 1992
။ Neurosteroids: ဦးနှောက်၏ဝတ္ထု function ကို။ Psychoneuroendocrinology 1998 23 963-987 ။ (doi:10.1016/S0306-4530(98)00071-7).
။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး Neurosteroid စည်းမျဉ်း။ ဆေးဝါးဗေဒ & ကုထုံး 2007 116 107-124 ။ (Doi: 10.1016 / j.pharmthera.2007.04.011).
။ neuroactive neurosteroids အဖြစ် dehydroepiandrosterone (DHEA) နှင့် dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) ။ PNAS 1998 95 4089-4091 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.95.8.4089).
Romieu P ကို,
မာတင်-Fardon R ကို,
မောရစ် T က
။ Sigma 1 အဲဒီ receptor-related neuroactive steroids ကင်း-သွေးဆောင်ဆုလာဘ် modulate ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 2003 23 3572-3576 ။
Maayan R ကို,
Doron R ကို,
Shabat-ရှိမုနျကို M က,
။ dehydroepiandrosterone (DHEA) ကြွက်များတွင် Self-အုပ်ချုပ်မှုပုံစံထဲမှာကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ attenuates ။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology 2006 16 329-339 ။ (Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2005.10.002).
ဗန် Gorp W က,
Hinken ကို C,
။ DHEAS နှင့် POMS အစီအမံကိုကင်းမှီခိုကုသမှုရလဒ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။ Psychoneuroendocrinology 2005 30 18-28 ။ (Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2004.04.006).
Fridman L ကို,
။ DHEA တစ် neurosteroid, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement လျော့နည်းစေပါသည်။ Neuropsychopharmacology 2006 31 2231-2236 ။
။ တစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဘိန်းဖြူစွဲအပေါ် DHEA ဖြည့်စွတ်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology 2008 18 406-413 ။ (Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2007.12.003).
Gispan ငါ &
။ မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက် dehydroepiandrosterone (DHEA) ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 2010 35 303-314 ။ (Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2010.03.003).
Kumar က S နဲ့,
။ ကြွက် adrenal နှင့်ဦးနှောက်အတွက် steroidogenesis ၏အီသနောသော induction pituitary ACTH လွှတ်ပေးရန်အပေါ်သို့မှီခိုသည်နှင့် က de Novo adrenal Star ပေါင်းစပ်။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ် 2010 112 784-796 ။ (Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2009.06509.x).
။ deoxycorticosterone ၏ mislabelling: corticosteroid ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို၏အဓိပ္ပာယ်အောင်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ် 2011 211 3-16 ။ (Doi: 10.1530 / Joe-11-0178).
Trabucchi M က,
ဤသို့ RH အ,
။ အီသနောသည် GABAergic ၏ neurosteroids များကိုအရက်ပိုကြွက်များပိုမိုတိုးပွားစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ် 1999 384 R1-R2 ။ (doi:10.1016/S0014-2999(99)00678-0).
Palamarchouk V ကို,
။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် passive ကင်းတာဟာကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် corticosterone ပြင်းအားအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (MPC) ထုတ်လုပ်ရန်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 2009 94 163-168 ။ (Doi: 10.1016 / j.pbb.2009.08.003).
Morita H ကို,
MF & Foecking
။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Aldosterone biosynthesis ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 1997 138 3369-3373 ။ (Doi: 10.1210 / en.138.8.3369).
Higo S က,
ဟိုကျိုမျိုး Y ကို,
Ishii H ကို,
Komatsuzaki Y ကို,
Ooishi Y ကို,
Mukai H ကို,
Yamazaki T က,
။ အဆိုပါ hippocampus အတွက် corticosteroids ၏ Endogenous ပေါင်းစပ်။ PLoS ONE 20116e21631 ။ (Doi: 10.1371 / journal.pone.0021631).
Gomez-Sanchez အီး &
။ extra-adrenal glucocorticoids နှင့် mineralocorticoids: ဒေသခံပေါင်းစပ်ဘို့သက်သေသာဓက, စည်းမျဉ်းများနှင့် function ကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ် 2011 301 E11-E24 ။ (Doi: 10.1152 / ajpendo.00100.2011).
ဒေးဗီးစ် E &
Mackenzie သည် SM
။ corticosteroids ၏ extra-adrenal ထုတ်လုပ်မှု။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်ဆေးဝါးဗေဒ & ဇီဝကမ္မဗေဒ 2003 30 437-445 ။ (Doi: 10.1046 / j.1440-1681.2003.03867.x).
ဟားဘတ် J ကို,
Goodyer ထားတဲ့ IM,
။ corticosteroids ဦးနှောက်ကိုပျက်စီးစေသလား? Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ် 2006 18 393-411 ။ (Doi: 10.1111 / j.1365-2826.2006.01429.x).
။ cortisone ၏ဇီဝဂုဏ်သတ္တိ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ လက်တွေ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ် 1950 10 1312-1354 ။ (Doi: 10.1210 / jcem-10-10-1312).
Khan က DA,
Hanczyc M က,
Bauer က MS,
။ ရေရှည် corticosteroid ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိလူနာနှင့်လူနာ-rated နှင့်ဆရာ-rated အကြေးခွံတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခံစားချက်ပြည်နယ်များ၏အကဲဖြတ်။ ဓာတ်မတည့, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ & ရောဂါပြီးပညာ၏ရာဇဝင် 2004 92 500-505 ။ (doi:10.1016/S1081-1206(10)61756-5).
။ စနစ်တကျ glucocorticoid ကုထုံး၏ဆိုးရွားသောစိတ်ရောဂါဆိုးကျိုးများ။ အမေရိကန်မိသားစုသမား 1992 46 1469-1474 ။
Suppes T က
။ corticosteroid ကုထုံးစဉ်အတွင်းစိတ်ဓါတ်များလက္ခဏာတွေ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဟားဗတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 19985239-246 ။ (Doi: 10.3109 / 10673229809000307).
Siroi က F
။ Steroid တစ်မျိုးစိတ္တ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အထွေထွေဆေးရုံကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2003 25 27-33 ။ (doi:10.1016/S0163-8343(02)00241-4).
။ corticosteroids ၏စိတ်ရောဂါဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ။ Mayo Clinic ဆေးခန်းတရားစွဲဆိုထား 2006 81 1361-1367 ။ (Doi: 10.4065 / 81.10.1361).
။ အဆိုပါ endocrine system ကို neuropsychiatry အကြား Interrelationships ။ Neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း 19635243-302 ။
ဗန် Craenenbroeck K သည်,
de Bosscher K သည်,
Vanden Berghe W က,
။ dopamine-related အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် glucocorticoids ၏အခန်းက္ပ။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 2005 245 10-22 ။ (Doi: 10.1016 / j.mce.2005.10.007).
Aurousseau ကို C,
လီ Moal M &
။ hippocampal ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် corticosteroid receptors ၏ဆိုလို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 2003 18 3105-3111 ။ (Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2003.03048.x).
Zunszain PA ဆိုပြီး,
Anacker ကို C,
။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် Glucocorticoids, cytokines နှင့်ဦးနှောက်မူမမှန်။ Neuro-Psychopharmacology & ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုတိုးတက်မှု 2011 35 722-729 ။ (Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2010.04.011).
။ အဆိုပါ glucocorticoid အဲဒီ receptor: စိတ်ကျရောဂါနှင့်လက္ခဏာကုသမှုမဏ္ဍိုင်? Psychoneuroendocrinology 2011 36 415-425 ။ (Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2010.03.007).
။ စိတ်ကျရောဂါအတွက်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှု၏ခန့်မှန်းအဖြစ် Glucocorticoids ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဟားဗတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2011 19 125-143 ။ (Doi: 10.3109 / 10673229.2011.586550).
လေး RH &
။ immunosuppressants အားဖြင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor-mediated ကူးယူ၏ Agonist-တိကျတဲ့မော်ဂျူ။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 1998 138 11-23 ။ (doi:10.1016/S0303-7207(98)00055-0).
Lovestone S က,
။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants cortisol ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းညှိသလား? Psychoneuroendocrinology 2004 29 423-447 ။ (Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2003.10.009).
။ steroids: လူနာစွဲ၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆရာဝန်။ နာတာရှည်ရောဂါများ၏ဂျာနယ် 1964 17 461-464 ။ (doi:10.1016/0021-9681(64)90106-7).
။ steroids စွဲ၏မူးယစ်ဆေးဖြစ်ကြသည်။ ဒူလာ 1965 21 50-54 ။
။ prednisone မှစွဲလမ်း။ BMJ 1973293-94 ။ (Doi: 10.1136 / bmj.2.5858.93).
Kligman လေး &
။ Steroid တစ်မျိုးစွဲ။ အရေပြားရောဂါဗေဒ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် 1979 18 23-31 ။ (Doi: 10.1111 / j.1365-4362.1979.tb01905.x).
။ glucocorticoids ပါဝင်သောဓာတုမှီခို။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ရာဇဝင် 19979185-187 ။ (Doi: 10.3109 / 10401239709147796).
။ prednisone နှငျ့ပတျသကျသောမူးယစ်ဆေးမှီခို: နှစ်ခုဖြစ်ပွားမှုနှင့်စာပေ၏သုံးသပ်ချက်။ Psychopharmacology သတင်းလွှာ 2008 41 154-163 ။
Sholar ကို MB,
Goletiani N ကို,
။ အမျိုးသားများတွင်စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များနှင့် HPA ဝင်ရိုးပေါ်ဆေးလိပ်နည်းပါးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောနီကိုတင်းစီးကရက်၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology 2005 30 1751-1763 ။ (Doi: 10.1038 / sj.npp.1300753).
Fox က HC,
။ ကိုကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် elevated cortisol နှင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှု: relapse ရလဒ်များမှဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychoneuroendocrinology 2009 34 1198-1207 ။ (Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2009.03.007).
။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး: ကောင်းသော corticosteroids သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေရှိပါသလဲ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 1999 22 422-426 ။ (doi:10.1016/S0166-2236(99)01438-1).
Conrad M က,
။ ခံစားချက်နဲ့ Cortisol လွှတ်ပေးရန်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုစိတ်ကြွဆေး၏ခံစားချက်သက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည် 2010 109 175-180 ။ (Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2009.12.029).
Deroche V ကို,
။ ကြွက်နှုတ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး corticosterone ။ ဦးနှောက်သုတေသန 1993 622 315-320 ။ (doi:10.1016/0006-8993(93)90837-D).
Maccari S က,
။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အဆင့်ဆင့်၏အကွာအဝေးအတွင်း Corticosterone ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ပိုင်ဆိုင်: အာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူတွေများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ PNAS 1993 90 11738-11742 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.90.24.11738).
de Jong က IE ကို,
Kloet ER က de
။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်း: glucocorticoids နှင့် epinephrine အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ Psychopharmacology 2009 204 693-703 ။ (doi:10.1007/s00213-009-1498-3).
။ stress- နှင့်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းအတွက် glucocorticoid receptors များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1995 275 790-797 ။
Marinelli M က,
Jodogne ကို C,
။ metyrapone အားဖြင့် corticosterone ပေါင်းစပ်၏တားစီးကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်း-သွေးဆောင်စက်ခေါင်းများနှင့် relapse လျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန 1994 658 259-264 ။ (doi:10.1016/S0006-8993(09)90034-8).
။ Corticosterone ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်: အမျိုးအစား II ကို glucocorticoid အဲဒီ receptor agonist dexamethasone ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1998 287 72-80 ။
။ glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးအတွက် mesolimbic dopaminergic ဂီယာအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိသည်။ PNAS 1996 93 15445-15450 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.93.26.15445).
Danilczuk Z ကို,
Lupina T က
။ Glucocorticoids ကြွက်များတွင် dopaminergic agonists အားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူသက်ရောက်မှု modulate ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ပိုလန်ဂျာနယ် 2001 53 467-473 ။
Aouizerate B က,
။ မော်ဖင်းအကိုက်မှ Dopamine-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု glucocorticoid receptors ပေါ်မူတည်သည်။ PNAS 1998 95 7742-7747 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.95.13.7742).
Deroche-Gamonet V ကို,
Izawa R ကို,
Jaber M က,
Ghozland S က,
။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချဖို့အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် glucocorticoid အဲဒီ receptor ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 2003 23 4785-4790 ။
Ambroggi က F,
Turiault M က,
Parnaudeau S က,
Barik J ကို,
ဗန် der Veen R ကို,
Lemberger T က
။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲ: dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor ကိုကင်းရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ 2009 12 247-249 ။ (Doi: 10.1038 / nn.2282).
စိန့် Amaux AL,
, ကို BP Guiard
Tronche က F
။ dopaminoceptive အာရုံခံ, ကိုကင်းများအတွက် key မှာ Glucocorticoid receptors, မော်လီကျူးများနှင့်အမူအကျင့်မော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန်မှုများအတွက်သာသနာဖြစ်ကြသည်။ ဟားဗတ် 2010 68 231-239 ။ (Doi: 10.1016 / j.biopsych.2010.03.037).
dong Z ကို,
ဟန် H ကို,
ဝမ် M က,
Xu L ကို,
။ မော်ဖင်းအကိုက်အေးစက်သောအရပ် preference ကို hippocampus နှင့်နျူကလိယ accumbens နှစ်ဦးစလုံးအတွက် glucocorticoid receptors ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Hippocampus 2006 16 809-813 ။ (Doi: 10.1002 / hipo.20216).
။ အစောပိုင်းဘဝ forebrain glucocorticoid အဲဒီ receptor overexpression စိုးရိမ်စိတ်အပြုအမူများနှင့်ကင်းာင်းတိုးပွားစေပါသည်။ ဟားဗတ် 2012 71 224-231 ။ (Doi: 10.1016 / j.biopsych.2011.07.009).
Desrivieres S က,
Muller ကို C,
Wong က CP,
Kaakinen M က,
Isohanni M က,
Charoen P ကို
။ Glucocorticoid အဲဒီ receptor (NR3C1) မျိုးဗီဇ polymorphic နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာအရက်အလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်း။ စွဲဇီဝဗေဒ 2011 16 510-513 ။ (Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2010.00239.x).
Ritu ကို C
။ အီသနော၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လုပ်ရပ်များအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neurobiology အတွက်အရေးပါပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 2003 15 41-59 ။ (Doi: 10.1615 / CritRevNeurobiol.v15.i1.20).
ဟူ M က
။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 2008 29 36-47 ။ (Doi: 10.1016 / j.yfrne.2007.07.003).
Gazi FM ရေ,
Niyomchai T က,
Foltz R ကို,
Quinones-Jenab V ကို
။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု, pharmacokinetics နှင့် monoamine အဆင့်ဆင့်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuropharmacology 2004 46 672-687 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2003.11.017).
ရက်သတ္တပတ် N ကို,
Lewis က R ကို,
Patel က F ကို,
တပ်-Jakel J ကို,
။ cortisol နှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဂေဟစနစ်သွေးဆောင်အဖြစ်စာမေးပွဲစိတ်ဖိစီးမှု။ စိတ်ဖိစီးမှု 20069199-206 ။ (Doi: 10.1080 / 10253890601029751).
Roelfsema က F,
။ လိင် endogenous ACTH-cortisol ထိုးတုန့်ပြန်၏အသက်အရွယ်မှီခိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ စည်းမျဉ်း, Integrated နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ 2009 297 R515-R523 ။ (Doi: 10.1152 / ajpregu.00200.2009).
က Parker CR ဂျူနီယာ &
။ လူသား၏ anterior pituitary gland အတွက် immunoreactive adrenocorticotropin ၏မော်လီကျူးပုံစံများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ endocrine သုတေသန 1999 25 397-410 ။ (Doi: 10.1080 / 07435809909066156).
Carr က BR,
Sasano H ကို,
Mason ဆို JI
။ လူ့ adrenal အန်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2002 13 234-239 ။ (doi:10.1016/S1043-2760(02)00609-4).
Muniyappa R ကို,
Johnson က ML,
Bhasin S က,
ဟာမန် SM &
။ ကျန်းမာအဟောင်းတွေယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက် dehydroepiandrosterone Secret: အသက်ကြီးအတွက် Testosterone နဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု။ လက်တွေ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏ဂျာနယ် 2006 91 4445-4452 ။ (Doi: 10.1210 / jc.2006-0867).
ဟားဘတ် J ကို
။ cortisol, လူသား၏ cerebrospinal fluid အတွက် dehydroepiandrosterone (DHEA), နှင့် DHEA sulfate: အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်နှင့်အသက်အရွယ်များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ လက်တွေ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏ဂျာနယ် 1996 81 3951-3960 ။ (Doi: 10.1210 / jc.81.11.3951).
။ မျိုးပွါးအတွက် adrenal cortex ၏အခန်းက္ပ။ ဗြိတိန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းလွှာ 1955 11 156-160 ။
Dorfman RI က
။ ကြွက် adrenal gland အားဖြင့် 18-hydroxydeoxycorticosterone ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 1963 73 713-720 ။ (Doi: 10.1210 / endo-73-6-713).
Critchlow V ကို,
ဘား-ကြော M က,
။ ကြွက်များတွင် pituitary-adrenal function ကိုအနားယူအတွက်လိင်ခြားနားချက်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် 1963 205 807-815 ။
။ adrenocortical ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ XXII ။ ကြွက် adrenal cortex အပေါ် gonadectomy နှင့် gonadal ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများအပေါ် Light- နှင့်အီလက်ထရွန်-ဏု morphometric လေ့လာမှုများ။ cell များနှင့်တစ်ရှူးသုတေသန 1986 244 141-145 ။ (Doi: 10.1007 / BF00218391).
တောရက်စ် JM &
Ortega E ကို
။ DHEA, PREG နှင့်သွေးရည်ကြည်နှင့်ဦးနှောက် CRH ပြီးနောက်နှင့် ACTH အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်သူတို့ရဲ့ဆာလဖိတ်အနကျအဓိပ်ပါယျ။ Neurochemical သုတေသန 2003 28 1187-1191 ။ (Doi: 10.1023 / A: 1024276328127).
။ စွဲလမ်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology 2003 13 435-441 ။ (Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2003.08.004).
။ စိတ်ဖိစီးမှု, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်: လူ့သုတေသနတစ်ခု update ကို။ စွဲဇီဝဗေဒ 2009 14 43-64 ။ (Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2008.00131.x).
။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ် 2011 168 566-568 ။ (Doi: 10.1176 / appi.ajp.2011.11020180).
။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှုမော်ဂျူ: Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူစွဲ comorbidity တို့အတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology 2011 62 552-564 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2011.07.007).
Schwabe L ကို,
။ စိတ်ဖိစီးမှု, အလေ့အထများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ: တစ် psychoneuroendocrinological ရှုထောင့်။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology 2011 19 53-63 ။ (Doi: 10.1037 / a0022212).
ဥဇ T က,
Akhisaroglu M က,
Ahmed က R &
Manev H ကို
။ အဆိုပါ pineal ဂလင်းဟာ striatum အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian Period1 စကားရပ်နှင့်ကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ကင်းာင်းအရေးကြီးသည်။ Neuropsychopharmacology 2003 28 2117-2123 ။
Ahmed က R ကို,
Kurtuncu M က,
မန်းဗင်း H &
ဥဇ T က
။ ကိုကင်းာင်းနှင့် Period1 အဆင့်ဆင့်အတွက် Diurnal rhythms ကြွက်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 2004 79 37-42 ။ (Doi: 10.1016 / j.pbb.2004.06.014).
Sergeeva အေ &
။ မူးယစ်ဆေး reinstatement ၏ Photoperiodic ဖိနှိပ်မှု။ neuroscience 2011 176 284-295 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2010.12.022).
Andretic R ကို,
Hirsh J ကို
။ ကိုကင်းာင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian မျိုးဗီဇ၏လိုအပ်ချက်အတွက် Drosophila. သိပ္ပံ 1999 285 1066-1068 ။ (Doi: 10.1126 / science.285.5430.1066).
Abarca ကို C,
Zghoul T က,
Sanchis-Segura ကို C,
Lascorz J ကို,
Depner M က,
Soyka M က
။ အဆိုပါနာရီဗီဇ Per2 အဆိုပါ glutamatergic system ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှု modulates ။ nature Medicine 2005 11 35-42 ။ (Doi: 10.1038 / nm1163).
Perreau-Lenz S က,
Spanagel R ကို
။ clock ဗီဇ amok running ။ clock ဗီဇနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ။ EMBO အစီရင်ခံစာများ 2007 8 S20-S23 ။ (Doi: 10.1038 / sj.embor.7401016).
။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ဗီဇတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology 2009 56 (ပျော့ပျောင်း 1) 91-96 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.06.054).
Kovanen L ကို,
Haukka J ကို,
Pirkola S က,
Partonen T က
။ အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian နာရီဗီဇ polymorphic ။ အရက်နှင့်အရက် 2010 45 303-311 ။ (Doi: 10.1093 / alcalc / agq035).
။ အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian နာရီ, ဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်ဉာဏ်။ မော်လီကျူးအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ 2011441 ။ (Doi: 10.3389 / fnmol.2011.00041).
Malison RT ကို,
Gelernter J ကို
။ လူ့နာရီ, PER1 နှင့် PER2 polymorphic: ကင်းမှီခိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ကင်း-သွေးဆောင်လီယံနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့မရှိခြင်း။ စိတ်ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇ 2006 16 245-249 ။ (Doi: 10.1097 / 01.ypg.0000242198.59020.ca).
Touitou Y ကို
။ အရက်သောက်ကျန်းမာလူက melatonin ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ထပ်တူမထိခိုက်ပါဘူး။ အရက်နှင့်အရက် 2006 41 386-390 ။ (Doi: 10.1093 / alcalc / agl036).
Danel T က,
။ လူသားများတွင်အရက်ဖို့ Steroid တစ်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian စနစ်၏တုံ့ပြန်ချက်: အချိန်အရေးပါမှုနှင့်စားသုံးမှု၏ကြာချိန်။ Chronobiology အင်တာနေရှင်နယ် 2006 23 1025-1034 ။ (Doi: 10.1080 / 07420520600920742).
Edwards က AV &
။ သတိနွားသငယ်အတွက် splanchnic အာရုံကြောနှိုးဆွနေစဉ် adrenal ကနေဖြန့်ချိအချက် corticotrophin ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဂျာနယ် 1988 400 89-100 ။
Ehrhart-Bornstein M က,
။ adrenocortical steroidogenesis ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Intraadrenal interaction က။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 1998 19 101-143 ။ (Doi: 10.1210 / er.19.2.101).
ဖူကူ T က,
Takahashi K သည်,
ဆူဇူကီး T က,
Saruta M က,
Watanabe က M ကို,
Sasano H ကို
။ Urocortin 1, urocortin3/ stresscopin, လူ့ adrenal နှင့်၎င်း၏မမှန်အတွက် corticotropin-releasing အချက် receptors ။ လက်တွေ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏ဂျာနယ် 2005 90 4671-4678 ။ (Doi: 10.1210 / jc.2005-0090).
Tsatsanis ကို C,
Venihaki M က,
Mina V ကို,
။ အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက် adrenal function ကိုဒေသခံ module ကို peptides ၏ (CRF) မိသားစု။ ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဘဝကသိပ္ပံ 2007 64 1638-1655 ။ (doi:10.1007/s00018-007-6555-7).
ဗန်ဒင် Brink W &
။ ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းစွဲဘို့ Pharmacological ကုသမှု။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology 2003 13 476-487 ။ (Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2003.08.008).
Sabino V ကို,
ဝါဂွမ်း P ကို,
Zhao နှင့် Y ကို,
Steardo L ကို,
။ တစ်ဦး Sigma-1 အဲဒီ receptor ရန်အားဖြင့် Sardinian အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်အရက်သေစာသောက်သုံး၏ရွေးချယ်လျော့ချရေး။ Psychopharmacology 2009 205 327-335 ။ (Doi: 10.1007 / s00213-009-1548-x).
။ self-အုပ်ချုပ်မှုအမူအကျင့်မော်ဒယ်အတွင်းနီကိုတင်းကာကွယ်ဆေးတစ်ဦးကဝေဖန်အကဲဖြတ်။ မော်လီကျူးဆေးဝါး 20107431-441 ။ (Doi: 10.1021 / mp900213u).
။ မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology 2001 24 97-129 ။ (doi:10.1016/S0893-133X(00)00195-0).
Miquel M က,
Toledo R ကို,
Garcia က LI,
Manzo J ကို
။ စွဲလမ်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားသည့်အခါငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်စိတ်ထဲအတွက် cerebellum ထားသငျ့သနညျး လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 2009226-40 ။ (Doi: 10.2174 / 1874473710902010026).
။ Glucocorticoids နှင့် psychostimulants ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ II ကို: ကင်းသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် reinstatement glucocorticoid အဆင့်ဆင့်ပေါ်မူတည်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1997 281 1401-1407 ။
။ Corticosterone အဆင့်ဆင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ဆုံးဖြတ်ရန်။ PNAS 1991 88 2088-2092 ။ (Doi: 10.1073 / pnas.88.6.2088).
de သညျယရှေု-Oliveira က C,
။ corticosterone Secret ၏ acute ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကင်းများ၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Neuropsychopharmacology 1997 16 156-161 ။ (doi:10.1016/S0893-133X(96)00169-8).
။ ကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်အစားအစာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် metyrapone နှင့် oxazepam ၏ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ 2008 91 181-189 ။ (Doi: 10.1016 / j.pbb.2008.07.005).
။ ကြွက်များတွင်ရှာကြံကိုကင်းများ၏အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် corticosterone ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology 2003 168 170-176 ။ (doi:10.1007/s00213-002-1200-5).
။ ကြွက် dorsolateral striatum အတွက် dopaminergic ဂီယာအပေါ် glucocorticoids ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 2001 13 812-818 ။ (Doi: 10.1046 / j.1460-9568.2001.01434.x).
။ Glucocorticoids နှင့် psychostimulants ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ ကျွန်မ: ကင်းဖို့ Locomotor တုံ့ပြန်မှု glucocorticoids ၏ Basal အဆင့်ဆင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ် 1997 281 1392-1400 ။
။ အထီး Sprague-Dawley ကြွက်များ၏ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုပလာစမာ corticosterone အဆင့်ဆင့်တို့ကရှင်းပြခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ neuroscience ပေးစာ 2010 476 9-13 ။ (Doi: 10.1016 / j.neulet.2010.03.032).
။ အရက်မှီခိုနှင့် neurotoxicity အတွက် glucocorticoids ၏အရေးပါမှုကို။ အရက်, လက်တွေ့များနှင့်စမ်းသပ်သုတေသန 2010 34 2011-2018 ။ (Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2010.01298.x).
Deroche-Gamonet V ကို
။ Mifepristone နှင့် spironolactone ကွဲပြားခြားနား C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာကင်းသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားပြောင်းလဲပစ်။ စွဲဇီဝဗေဒ 2010 15 81-87 ။ (Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2009.00178.x).
။ ဦးနှောက်ထဲမှာ glucocorticoid အဲဒီ receptor ချို့တဲ့ Transgene ကြွက်တွေမှာကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းအောက်ပါဗီဇစကားရပ်စည်းမျဉ်း။ neuroscience 2006 137 915-924 ။ (Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2005.10.006).